1st Book Taariikhdii – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Old Testament / 1st Book Taariikhdii
1:1 Adam, Seth, Enoos,
1:2 Qaynaan, Mahalale'elna, Jared,
1:3 Enoch, Metushelaxna, Lameg,
1:4 Nuux, Sheem, Ham, iyo Yaafed.
1:5 Wiilashii Yaafed: Gomer, iyo Maajuuj, iyo Maaday, iyo Yaawaan, Tubal, Mesheg, strips.
1:6 Oo reer Gomer: Ashkenas, iyo Riifad, iyo Togarmaah.
1:7 Oo reer Yaawaan: Eliishaah, iyo Tarshiish, Kitiim, iyo Rodaaniim.
1:8 Wiilashii Xaamna: Kuushna, iyo Misrayim, iyo rid, iyo reer Kancaan.
1:9 Oo reer Kuush: qudhiisa, iyo Xawiilaah, Sabtaah, iyo reer Racmaahna, iyo Sabteka. Oo wiilashii Racmaahna: Sheba iyo Dadan.
1:10 Markaas Kuush uuraysatay Nimrod, oo wuxuu bilaabay inuu awood dhulka ku kor yaal.
1:11 Runtii,, Misrayimna Luudiim uuraysatay, iyo Canaamiim, iyo Lehaabiim, iyo Naftuxiim,
1:12 iyo sidoo kale Pathrusim iyo Kasluxiim: kuwan reer Falastiin iyo reer Kaftoriim oo soo baxay.
1:13 Runtii,, Kancaan uuraysatay Siidoon, oo ahaa curadkiisii, iyo sidoo kale kii reer Xeed,
1:14 iyo reer Yebuus, iyo reer Amor, iyo reer Girgaash,
1:15 iyo reer Xiwi, iyo reer Carqi, iyo reer Siini;,
1:16 iyo sidoo kale Arvadian ah, iyo Samarite ah, iyo reer Xamaad.
1:17 Wiilashii Sheemna: Ceelaam, iyo Ashuur, iyo Arfaksad, iyo reer Luud,, iyo Araam, iyo Cuus, iyo Xuul, iyo Geter, iyo Mesheg.
1:18 Markaas Arfaksad uuraysatay Sheelaah, oo isaguna uuraysatay Ceeber.
1:19 Oo Ceeberna waxaa u dhashay laba wiil. mid magiciisu wuxuu ahaa Feleg, waayo, waagiisii ​​ayaa dhulku qaybsamay. Oo waxay magicii walaalkiis wuxuu ahaa Yoqtaan.
1:20 MARKAA Yoqtaanna wuxuu dhalay Almoodaad uuraysatay, iyo Shelef, iyo Xasarmaawed, iyo Yerah;,
1:21 iyo sidoo kale Hadooraam, iyo Uusaal, iyo Diqlah,
1:22 ka dibna Coobaal, iyo Abiimaa'el, iyo Sheba, dhab ahaan
1:23 Waxa kale oo Oofir, iyo Xawiilaah, iyo Yoobaab. Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Yoqtaan.
1:24 Sheem, Arfaksad, Sheelaah,
1:25 Ceeberna, Feleg, eyga,
1:26 Seruugna, Naaxoor, Terax,
1:27 Aabraam, oo taasuna waa Ibraahim.
1:28 Oo wiilashii Ibraahim: Isxaaq iyo Ismaaciil.
1:29 Oo kuwanuna waa qarniyadoodii,: Curadkii Ismaaciil, Nebayod, oo dabadeedna wuxuu dhalay Qedaar, iyo Adbe'el, iyo Mibsam,
1:30 iyo Mishmaac, iyo Duumah, saxarka, Hadad, iyo Teemaa,
1:31 Yetuur, Agabka Aan Cuntada Ahayn, Nafish. Kuwanu waa wiilashii Ismaaciil.
1:32 Oo wiilashii Qetuurah, naagtiisii ​​addoonta ahayd Ibraahim, kuwaasoo iyana way uuraysatay: Simraan, Yoqshaan, dhul, Midyaan, Yishbaaq, iyo Shuu'ah. Oo wiilashii Yoqshaan: Shebaa, iyo Dedaan. Oo reer Dedaanna: Ashuurim, iyo Letushim, iyo Le'ummiim.
1:33 Oo reer Midyaan: Ceefah, iyo Ceefer, iyo Xanoog, iyo Abiidac, iyo Eldacah. Kuwan oo dhammu waa wiilashii Qetuurah.
1:34 Haddaba Ibraahim iyo Isxaaq uuraysatay, wiil, oo waxay ahaayeen Ceesaw iyo Israa'iil.
1:35 Wiilashii Ceesawna: Eliifas, Recuu'eel, Yecuush, Yaclaam, iyo Qorax.
1:36 Waa wiilashii Elifas kii: saaxiib, Omar, Sefoo, Gactaam, Kenez, iyo Timnac, Camaaleq.
1:37 Wiilashii Recuu'eel: Nahad, Serax, Shammah, Misaah.
1:38 The wiilashii Seciir,: Lootaan, Shoobaal, Sibecoon, Canah, Dishon, kun, Diishaan.
1:39 Wiilashii Lootaanna: in, Heemaan. Haddaba walaashiis Lootaanna waxay ahayd Timnac.
1:40 Wiilashii Shoobaalna: kale, iyo Maanahad, iyo Ceebaal, Kshefi, iyo Oonaam. Wiilashii Sibecoon: Ayah, iyo Canah. Wiilashii Canah: Dishon.
1:41 Wiilashii Dishon: Xamraan, iyo Esheban, iyo Yitraan, iyo Keraan.
1:42 Wiilashii Ceser: Bilhaan, iyo Sacwaan, iyo Will. The carruurtii Diishaan: Cuus iyo Araan.
1:43 Haddaba kuwanu waa boqorradii u talin jiray dalka reer Edom, ka hor waxaa jiray boqor u taliya reer binu Israa'iil: qurux badan, oo ahaa ina Becoor; iyo magaca uu magaalada odhan jiray Dinhaabah.
1:44 Markaasaa Belac dhintay, iyo Yoobaab, ina Serax, Bosraah, meeshiisiina waxaa boqor ka.
1:45 Markaasaa Yoobaab sidoo kale ku dhinteen, Xushaam, ka yimid dalka reer Teemaan, meeshiisiina waxaa boqor ka.
1:46 Markaasaa Xushaam oo sidoo kale idlaadeen, iyo Hadad, ina Bedad, meeshiisiina waxaa boqor ka. Oo isna wuxuu ku dhuftay reer Midyaan ku taal dalka reer Moo'aab. Magaca isna magaaladiisu waxay ahayd Cawiid.
1:47 Oo markii Hadad sidoo kale ku dhinteen, Samlah ka Masreqah meeshiisii ​​boqor ka noqday.
1:48 Markaasaa Samlah dhintay, iyo Shaa'uul oo ka yimid Rexobod, kaas oo ku sugnaa ag webi, meeshiisiina waxaa boqor ka.
1:49 Shaa'uul sidoo kale isagoo dhintay, Xadgudubyada caruurta, ina Cakboor, meeshiisiina waxaa boqor ka.
1:50 Markaasuu wuxuu sidoo kale ku dhintay, iyo Hadar meeshiisii ​​boqor ka noqday. Oo waxay magicii isna magaaladiisu waxay ahayd Faacuu. Markaasaa naagtiisii ​​waxaa la odhan jiray Meheetabeel, oo ay Matreed, gabadha Meesaahaab dhashay.
1:51 Oo Hadar isagoo dhintay, waxaa bilaabay inuu taliyey in Edom meel boqorrada: Taliyaha Lootaan, Taliyaha Alvah, Taliyaha Yeteed,
1:52 Taliyaha Aaholiibaamah, Taliyaha Eelaah, maamula Fiinon,
1:53 maamula Kanez, Taliyaha Friend, Taliyaha Mibzar,
1:54 Taliyaha Magdii'eel, Taliyaha cadhadii. Kuwanu waa taliyayaasha reer Edom.
2:1 Oo reer binu Israa'iil: Ruubeen, Simecoon, Levi, Yahuudah, Isaakaar, iyo reer Sebulun,
2:2 iyo, Yuusuf, Benjamin, Naftaali, Gaad, iyo reer Aasheer.
2:3 Wiilashii Yahuudahna: waa, Oonaan, iyo Sheelaah. oo saddexdaas waxaa isaga u dhashay ka Shuuca gabadhiisii ​​oo, Kancaan. laakiin ma, oo ahaa curadkii Yahuudah, Rabbiga hortiisa shar ku ah Rabbiga ahaa, oo sidaas daraaddeed wuu u dilay.
2:4 Haddaba Taamaar, gabadhii uu soddogga, u dhashay isaga Feres iyo Serax. Sidaa darteed, oo dhan wiilashii Yahuudahna waxay ahaayeen shan.
2:5 Oo wiilashii Perez: Iyo Xesroon, iyo Xaamuul.
2:6 Sidoo kale, Wiilashii Seraxna: Simrii, iyo Eetaan, iyo Heemaan, iyo sidoo kale Kalkol, iyo Daarac, shan wadajir.
2:7 Ina Karmiina: heli, kuwaas oo soo dhibtay Israa'iil iyo dembaabay by tuugada ah ee waxa ay ahayd inkaarnaado.
2:8 Ina Eetaanna: Casaryaah.
2:9 Oo weliba Xesroon wiilashiisii ​​u dhashay waxay ahaayeen in: Yeraxme'eel, iyo Raam, iyo Keluubay.
2:10 Markaas Ram uuraysatay Cammiinaadaab. Cammiinaadaabna wuxuu uuraysatay Naxshoon, hoggaamiye oo ka mid ah Wiilashii Yahuudahna.
2:11 Sidoo kale, Naxshoon uuraysatay Salma, ka ninkii Bocas ka kacay.
2:12 Runtii,, Bocasna wuxuu dhalay Coobeed uuraysatay, oo isaguna uuraysatay Jesse.
2:13 Haddaba Jesse uuraysatay Elii'aab oo ahaa curadkii, labaad Abiinaadaab ah, saddexaad oo Shammaah ahaa,
2:14 Netaneel afaraad, Iyo Radday oo shanaad,
2:15 Osem oo ahaa kii lixaad, David toddobaad.
2:16 walaalahoodii gabdhaha ahaana waxay ahaayeen Seruuyaah iyo Abiigayil. The wiil ee ay Seruuyaah: Abiishay, Yoo'aab, iyo Casaaheel, saddex.
2:17 Markaasaa Abiigayil uuraysatay Camaasaa, aabbihiisna wuxuu ahaa Yeter, Ismaaciil.
2:18 Runtii,, Kaaleeb, ina Xesroonna, wuxuu guursaday naag la odhan jiray Casuubaah, kii uu ka uuraysatay Yeriicood. Iyo wiilasheedii waxay ahaayeen waana Yeesher, iyo Shoobaab, iyo Ardoon.
2:19 Oo Casuubaahna way ku dhinteen, Kaaleeb wuxuu guursaday Ephratha, waxay isagii u dhashay Xuur.
2:20 Haddaba Xuur uuraysatay Uurii. Iyo Uurii uuraysatay Besaleel.
2:21 dabadeedna, Iyo Xesroon galay inay ina Maakiir, aabbihiis reer Gilecaad. Kolkaasuu kaxaystay iyadii oo isagoo lixdan sannadood jira. Oo waxay u dhashay isaga u dhashay Seguub.
2:22 Oo markaas Seguub uuraysatay Yaa'iir, oo wuxuu ku hantiyeen saddex iyo labaatan magaalo ku taal dalka reer Gilecaad.
2:23 Oo isna wuxuu ku qabteen Geshuur iyo Araam, magaalooyinkii reer Yaa'iir, iyo Qenaad, iyo tuulooyinkeedii, lixdan magaalo. Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Maakiir, aabbihiis reer Gilecaad.
2:24 Markaasuu, marka Xesroon ku dhinteen, Kaaleeb galay in Ephratha. Sidoo kale, Iyo Xesroon wada guursadeen Abiiyaah, Kii u dhashay Ashxuur, oo ahaa Teqooca aabbihiisna.
2:25 Haddaba wiilal u dhashay Yeraxme'eel, oo ahaa curadkii Xesroon: Ram, oo ahaa curadkiisii, iyo Buunaah, iyo Oren, iyo Osem, iyo Axiiyaah.
2:26 Oo Yeraxme'eelna wuxuu guursaday naag kale, la odhan jiray Cataaraah, kuwaas oo ahaa Oonaam hooyadiis.
2:27 Markaasuu aad u, Wiilashii Ram, curadkii Yeraxme'eel, waxay ahaayeen Macas, Guarantee, iyo Ceeqer.
2:28 Iyo Oonaam wiilal: Shammay, iyo Yaadaac. Oo wiilashii Shammayna: Naadaab iyo Abiishuur.
2:29 Runtii,, magaca naagtii Abiishuur jiray Abiixayil, kuwa u dhashay isaga Axbaan iyo Mooliid.
2:30 Haddaba Wiilashii Naadaabna waxay ahaayeen Seled, iyo Afayim. Oo Seled dhintay carruurla'aan.
2:31 Runtii,, ina Afayim ahaa Yishcii. Iyo Yishcii uuraysatay Sheeshaan. Markaasaa Sheeshaan uuraysatay Axlay.
2:32 Laakiin oo Yaadaac ahaa wiilashiisiina, Shammay walaalkiisii, waxay ahaayeen Yeter, iyo Yoonaataan. Markaas Yeter oo sidoo kale dhintay carruurla'aan.
2:33 Markaasaa Yoonaataan uuraysatay Feled, iyo Saasaa. Kuwanu waxay ahaayeen wiilashii Yeraxme'eel.
2:34 Haddaba Sheeshaan wiilal ma lahayn, isagoo gabdho keliya mooyaane, iyo addoon Masri ah la odhan jiray Yarxaac.
2:35 Oo sidaas daraaddeed isna wuxuu isagii ku siiyey gabadhiisii ​​guursadee, waxay isagii u dhashay Catay in.
2:36 Markaas Catay uuraysatay Nathan, iyo Nathan uuraysatay Saabaad.
2:37 Sidoo kale, Saabaad uuraysatay Eflaalna, Eflaalna wuxuu dhalay Coobeed uuraysatay.
2:38 Coobeedna wuxuu Yeehuu uuraysatay; Yeehuu uuraysatay Casaryaah.
2:39 Casaryaah oo ahaa Xeles uuraysatay, iyo Xeles oo dhalay Elecaasaah uuraysatay.
2:40 Elecaasaahna wuxuu dhalay Sismay uuraysatay; Sismayna wuxuu dhalay Shalluum, uuraysatay.
2:41 Shalluum uuraysatay Yeqamyaah; markaas Yeqamyaah uuraysatay Eliishaamaac.
2:42 Oo Kaaleeb wiilashiisiina, Yeraxme'eel walaalkiis, ahaayeen Meeshaa, oo ahaa curadkiisii, kuwaas oo ahaa Siif aabbihiis, iyo reer Meeshaa, oo ahaa Xebroon aabbihiis.
2:43 Haddaba kuwii reer Xebroonna waxay ahaayeen Qorax, iyo Tapuah, iyo Reqem, iyo Shemac.
2:44 Markaas Shemac uuraysatay Raxam, Yorqecaam aabbihiis, Reqemna. Iyo Reqem uuraysatay Shammay.
2:45 Shammay wiilkiisiina wuxuu ahaa Maacoon,, Maacoonna wuxuu ahaa Beytsuur aabbihiis.
2:46 Haddaba Ceefah, naagtiisii ​​addoonta ahayd oo reer Kaaleeb, u dhashay Xaaraan, iyo Moosaa, iyo Gaasees. Haaraanna wuxuu uuraysatay Gaasees.
2:47 Oo Wiilashii Yaahdayna: Boqor, iyo Yootam, iyo Geeshaan, iyo Feled, iyo Ceefah, iyo Shacaf.
2:48 Oo Macakaah, naagtiisii ​​addoonta ahayd oo reer Kaaleeb, u dhashay Sheber iyo Tirxanaah.
2:49 Markaas Shacaf, Madmannaah aabbihiis,, uuraysatay Shewaa, aabbihiisna wuxuu ahaa Makbeenaa, oo ahaa Makbeenaa aabbihiis. Runtii,, oo Kaaleeb gabadhiisana waxaa la odhan jiray Caksaah.
2:50 Kuwanu waxay ahaayeen wiilashii Kaaleeb, oo ah ina Xuur, oo ahaa curadkii Ephratha: Shoobaal, aabbihiisna wuxuu ahaa Qiryad Yecaariim;
2:51 Salma, oo ahaa Beytlaxam aabbihiis; ः Aref, Beytgaadeer aabbihiis.
2:52 Haddaba waxaa jiray Wiilal iyo Shoobaal, aabbihiisna wuxuu ahaa Qiryad Yecaariim, kuwaas oo arkay qeybtii meelo nasasho.
2:53 Oo xigaalo oo ahaa Qiryad Yecaariim: Yeter, iyo reer Shumaatii, iyo reer Shumaatii, iyo reer Mishraacii,. Kuwaasay, reer Sorcaah, iyo reer Eshtaa'ool soo baxay.
2:54 Wiilashii Salmaana: Beytlaxam, iyo reer Netofaah, ee saarnaa taajaj guriga Yoo'aab, iyo badh meelaha nasasho reer Sorcaah,
2:55 iyo sidoo kale qoysaska culimmada ah waxay ku nool Yaabeesh, kuwa gabyaya oo music, iyo kuwa dhex deggan teendhooyin. Intaasu waa reer Qeynkii ka, kuwaas oo ka baxay Calor, aabbe u ahaa reer Reekaab.
3:1 Runtii,, David wuxuu lahaa wiilal, kuwaas oo, kuwaas oo isaga ugu dhashay Xebroon: curadkiisu wuxuu ahaa Amnoon, oo waxaa dhashay Axiinocam reer Yesreceel; labaadna wuxuu ahaa Daanyeel, ka dhashay Abiigayil tii reer Karmel;
3:2 saddexaad Absaaloom, oo ahaa ina Macakaah, gabadhii Talmay, boqorkii Geshuur; Adoniiyaah oo ay afaraad, oo ay Haggiid dhashay;
3:3 Shefatyaah shanaad, oo ay Abiital dhashay; Yitrecaam lixaad, ka naagtiisa Ceglaah.
3:4 Sidaa darteed, Lix waxay ugu dhasheen Xebroon, halkaas oo uu boqor ka ahaa toddoba sannadood iyo lix bilood. Markaas ayuu boqor ku ahaa saddex iyo soddon sannadoodna Yeruusaalem.
3:5 Haddaba Yeruusaalem, Wiilashii waxay isaga ugu dhasheen: Shammuuca, iyo Sobab, iyo Nathan, iyo Sulaymaan, kuwaas oo afar ka Batshebac, gabadhiisii ​​oo ahayd ina Cammii'eel;
3:6 sidoo kale Baararka iyo Eliishaamaac,
3:7 iyo Eliifeled, iyo Nogah, iyo Nefeg, iyo Yaafiica,
3:8 Hubaal sidoo kale Eliishaamaac, iyo Elyaadaac, iyo Eliifeled, sagaal.
3:9 Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Daa'uud, gees u oo wiilashiisii ​​uu addoommaha ka. Oo waxay lahayd walaal, Taamaar.
3:10 Haddaba ina Sulaymaan wuxuu ahaa Rexabcaam, kii laga Abiiyaah wiil bay uuraysatay, sidaas darteed. Oo wuxuu isaga ka, Yehooshaafaad waxaa u dhashay,
3:11 aabbihiisna wuxuu Yehooraam. Oo Yehooraam ayaa uuraysatay Axasyaah, ka Yehoo'aash kii waxaa uu ku dhashay.
3:12 Iyo wiilkiisa, Amasyaah, uuraysatay Casaryaah. Markaasaa Yootam, oo ahaa ina Casaryaah,
3:13 uuraysatay Aaxaas, wuxuu dhalay Xisqiyaah, ka Manaseh kii waxa uu ku dhashay.
3:14 Markaasuu aad u, Manaseh uuraysatay Aamoon, aabbihiis Yoosiyaah.
3:15 Wiilashii Yoosiyaahna waa kuwan: curadkiisii ​​Yooxaanaan, kii labaadna Yehooyaaqiim, kii saddexaadna Sidqiyaah, Kii afraadna Shalluum.
3:16 From Yehooyaaqiim ku dhashay wiilkiisii ​​Yekonyaah, iyo Sidqiyaah.
3:17 Maxbuuskii Yekonyaah ahaa wiilashiisii ​​waxay maxaabiis ahaan u ahaayeen: Salaatii'eel,
3:18 Malkiiraam, Fedaayaah, Shen'asar, iyo Yeqamyaah, Hooshaamaac, iyo Nedabyaah.
3:19 From Fedaayaah, waxaa kacay Serubaabel, iyo Shimcii. Serubaabel uuraysatay Meshullaam, Xananyaah, iyo walaashood Shelomiid,
3:20 iyo sidoo kale Xashubaah, iyo Ohel, iyo Berekyaah, iyo Xasadyaah, Yuushabxesed Yuushabxesed, shan.
3:21 Hadda oo ahaa ina Xananyaah ahaa Felatyaah, aabbe u ahaa waxaa ka socday Yeshacyaah, kuwaas oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Refaayaah. Oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Arnaan, kuwaasoo uu ku dhashay Cobadyaah, kuwaas oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Shekaanyaah.
3:22 Wiilka uu dhalay Shekaanyaahna waxay ahaayeen Shemacyaah, wiil, oo waxay ahaayeen: Xatuush, iyo Yigaal, iyo Baarii'ax, iyo Necaryaah, iyo Shaafaad,, lix tirada.
3:23 Wiilashii Necaryaahna: Eliyooceenay, iyo Hizkiaj, iyo Casriiqaam, saddex.
3:24 Wiilashii Eliyooceenay: Hoodawyaah, iyo Eliyaashiib, iyo Felaayaah, iyo Caquub, iyo Yooxaanaan, iyo Delaayaah, iyo Canaanii, toddoba.
4:1 Wiilashii Yahuudahna: Perez, iyo Xesroon, iyo Karmii, iyo sida, iyo Shoobaal.
4:2 Runtii,, Re'aayaah, oo ahaa ina Shoobaalna, uuraysatay Yaaxad; isaga ka dhashay waxay ahaayeen Axuumay iyo Lahad. Kuwan waxaa xigaalo reer Sorcaah.
4:3 Oo kanu waa stock weyn oo Ceetaam: Yesreceel, iyo Yishmaa, iyo Yidbaash. Iyo magaca walaashood jiray Haselelfoonii.
4:4 Haddaba Fenuu'eel ahaa oo ahaa Gedoor aabbihiis, iyo Ceser oo ahaa Xuushaah aabbihiis oo la. Kuwanu waa wiilashii Xuur, oo ahaa curadkii Ephratha, oo ahaa Beytlaxam aabbihiis.
4:5 Runtii,, waayo, Ashxuur, oo ahaa Teqooca aabbihiisna, waxaa jiray laba naagood: Tricks iyo kansarka.
4:6 Oo Nacaraah waxay isagii u dhashay in: Axuusaam, iyo Heefer, iyo Teemnii, iyo Haa'axashtaarii. Kuwanu waa wiilashii Nacaraah.
4:7 Oo Xelaah wiilasheediina waxay ahaayeen Sered, iyo Isehaar, iyo Etnaan.
4:8 Haddaba Xaqoos uuraysatay Caanuub, iyo Sobeebaah, iyo xigaalo reer Axarxeel, oo ahaa ina Haaruum.
4:9 Laakiin Yacbeesna wuu caan ah, dheeraad ah si badnaa walaalihiis oo dhan, oo hooyadiis ayaa isagii ku magacawday Yacbees, oo wuxuu ku yidhi, "Waayo, waxaan isaga u dhashay ee murug."
4:10 Runtii,, Yacbeesna wuu ku dul ah Ilaaha reer binu Israa'iil u yeedhay, oo wuxuu ku yidhi, "Haddii kaliya, marka barakaynayay, inaad i barakaysid doonaa, iyo xuduudaha aan weynayn doonaa, oo gacanta ila jiri doona, oo aad ka dhigi doonaa i aan la dulmay by xun. "Oo Ilaah wuxuu isaga ku siiyey waxyaalihii taas oo uu ku tukaday.
4:11 Haddaba Keluub, kii walaal u yahay Shuhah, uuraysatay Mexiir, oo ahaa Eshtoon aabbihiis.
4:12 Markaas Eshtoonna wuxuu uuraysatay Beytraafaa, iyo Faasee'ax, iyo Texinnaah, aabbe u ahaa magaalada Naaxaash. Kuwanu waa dadkii reer Recah.
4:13 Haddaba Wiilashii Qenasna waxay ahaayeen, Cotnii'eel, iyo Seraayaah. Oo reer Cotnii'eel ahaayeen Xatad iyo Mecoonotayna.
4:14 Mecoonotayna wuxuu uuraysatay Cofraah, laakiin Seraayaah uuraysatay Yoo'aab, aabbe u ahaa dooxadii farsamo. Waayo,, halkaas waxaa joogay farsamo.
4:15 Runtii,, Wiilashii Keluub, oo ahaa ina Yefunneh, waxay ahaayeen Iiruu, iyo Eelaah, iyo Name. Oo wiilashii Eelaah: Qenas.
4:16 Sidoo kale, Wiilashii Yehaleleelna: Siif iyo Siifaah, Iyo Tiiryaa, iyo Asareel.
4:17 Oo wiilashii Ilmaha Cesraahna: Yeter, iyo Mered, iyo Ceefer, iyo Yaaloon; oo wuxuu uuraysatay Miriam, iyo Shammay, iyo Yishbax, Eshtemooca aabbihiis.
4:18 Oo markaas waa inuu naagtiisa, Judaia, u dhashay Yered, oo ahaa Gedoor aabbihiis, iyo Xeber, oo ahaa Sookoo aabbihiis, iyo Yequutii'eel, Saanoo'ax aabbihiis. Haddaba waxaa jiray wiilashii Bityaah, gabadhii Fircoon, Mered guursaday,
4:19 iyo wiilashii naagtiisii ​​oo ahayd Naxam, ka walaashiis of Naham, aabbe u ahaa Qeciilaah kii reer Garmii, iyo Eshtemooca, kuwaas oo ahaa ka Maacathi.
4:20 Oo Wiilashii Shiimoonna: Amnoon, iyo Rinnaah, ina Xaanaan, iyo Tiiloon. Oo wiilashii Yishcii: Sooxeed iyo Bensooxeed.
4:21 Wiilashii Sheelaah, kan ahaa ina Yahuudah: waa, oo ahaa Leekaah aabbihiis, and Laadah, oo ahaa Maareeshaah aabbihiis, iyo xigaalo guriga ka shaqeeya maro wanaagsan in guriga dhaartii,
4:22 oo kii sababay qorraxda si ay u istaagaan, iyo raggii reer beenta, iyo Xafido, iyo Gubidda, oo ahaa madaxda reer Moo'aab, oo ku soo noqday galay Beytlaxam. Haddaba erayadanu waa qadiimiga ah.
4:23 Kuwani waa dheryodhoobyadii ku nool Plantations iyo xaydaanka, la boqor shuqulladiisa, oo halkaasay deggan ayaa.
4:24 Wiilashii Simecoon: Nemuu'eel, iyo Yaamiin, Yaariib, Serax, Shaa'uul;
4:25 Shalluum wiilkiisa, oo isna dhalay Mibsam, Mishmaac wiilkiisa.
4:26 Wiilashii Mishmaac: wiilkiisii ​​ahaa Xamuu'eel, Sakuur wiilkiisa, Shimcii ina.
4:27 Wiilashii Shimciina waxay ahaayeen lix iyo toban, oo waxaa ku yiil lix gabdhood. Laakiin walaalihiis ma ay leeyihiin wiilal badan, oo dhan xigaalo ma wuxuu u dhigmaa wadarta reer Yahuudah.
4:28 Hadda waxay ku noolaa Bi'ir Shebac, iyo Molaadaah, iyo Xasar Shuucaal,
4:29 iyo Bilhah, iyo boqortooyadayda,, iyo Toolad,
4:30 iyo Betuu'eel, iyo Xormaah, iyo Siiqlag,
4:31 iyo Beytmarkaabod, iyo Xasar, iyo in Bethbiri, iyo Shacarayim. Intaasu waxay ahaayeen magaalooyinkoodii ay degganaayeen tan iyo Boqor Daa'uud.
4:32 Oo magaalooyinka waxay ahaayeen Ceetaam, iyo Cayn, Rimmon, iyo Token, iyo Caashaan,, shan magaalo,
4:33 iyo tuulooyinkoodii oo dhan, dhinac kasta magaalooyinkaas, ilaa tan iyo Bacal. Tani waa hoygooda iyo qaybinta degsiimooyinka.
4:34 Oo waxaa jiray Meshoobaab, iyo Yamleeg, iyo Yooshaah, oo ahaa ina Amasyaah,
4:35 iyo Yoo'eel, iyo Yeehuu, oo ahaa ina Yooshibyaah, ina Seraayaah, ina Casii'eel,
4:36 iyo Eliyooceenay, iyo Yacaqobaah, iyo Yeshooxaayaah, iyo Casaayaah oo ahaa, iyo Cadii'eel, iyo Yesiimi'eel, iyo Benaayaah,
4:37 iyo sidoo kale Siisaa, oo ahaa ina Shifcii, ina Alloon, ee ahaa reer Yedacyaah, oo ahaa ina Shimrii, oo ahaa ina Shemacyaah.
4:38 Kuwaasu waxay ahaayeen magacyada madaxda ee Qaraabadooda. Kolkaasaa waxaa u tarmaan guryaha guur gudahooda.
4:39 Oo iyana waxay ku soo baxay, si ay u geli karayn Gedoor, iyo tan iyo dooxada bari, iyo si ay u doondoonaan laga yaabaa in daaqii ay idahooda.
4:40 Oo waxay arkeen kaxeeyey daaqa barwaaqaysan oo aad u wanaagsan, iyo dalkii aad u ballaaran oo xasilloon oo badan dhala, kuwaas oo qaar ka mid ah ka ahay jinsiga reer Ham ku noolaa ka hor.
4:41 Sidaas daraaddeed, kuwa aan magacooda lagu kor ku qoran, u baxay wakhtigii Xisqiyaah, ee ahaa boqorkii dalka Yahuudah. Oo iyana waxay ku laayay dadkii degganaa, kuwaas oo halkaas laga helay ayaa la Guryahoodii. Oo waxay ku tirtirto, ilaa maantadan la joogo. Oo iyana waxay degeen meel oo ka mid ah, maxaa yeelay, iyagu halkaas laga helay daaqa aad u buuran.
4:42 Sidoo kale, qaar ka mid ah reer Simecoon, shan boqol oo nin, tageen Buur Seciir, isagoo sida madaxda Felatyaah, iyo Necaryaah, iyo Refaayaah, iyo Cusii'eel, Wiilashii Yishciina.
4:43 Oo waxay hoos ku dhuftay ka hadhay reer Camaaleq, kuwii awoodin in ay ka baxsadaan, oo halkaas ayay degeen meel oo ka mid ah, ilaa maantadan la joogo.
5:1 Sidoo kale, halkaasna waxaa joogay dadkii reer Ruubeen, oo ahaa curadkii Israa'iil. Waayo,, wuxuu ahaa curadkiisii ​​ahaa, laakiin markii uu ku xadgudbay sariirta aabbihiis, uu xaq u leeyahay inuu curadkiisii ​​yahay waxaa la siiyey wiilashii Yuusuf, ina Israa'iil, oo ma uu lama simna, siduu ahaa curadkii.
5:2 Waxaa intaa dheer, Yahuudah, kuwaas oo walaalihiis ka mid ahaa ugu adag, ka madaxda uu stock soo baxeen, laakiin xaqa curadnimada waxaa loo maleeyey inay Joseph.
5:3 Sidaas daraaddeed, oo wiilashii Ruubeen, oo ahaa curadkii Israa'iil, waxay ahaayeen Xanoog, iyo Falluu, Iyo Xesroon, iyo Karmii.
5:4 Wiilashii Joel: wiilkiisii ​​Shemacyaahna, Juuj, oo isna ina, Shimcii ina,
5:5 Micah wiilkiisa, oo isna dhalay Re'aayaah, Bacal wiilkiisa,
5:6 Beerah his son, Tilgad Filneser, oo wuxuu boqorkii reer Ashuur, kaxaystay maxaabbiis ahaan, oo wuxuu ahaa hoggaamiye ee qabiilka reer Ruubeen.
5:7 Haddaba walaalihiis oo qaraabadeedii oo dhanna, markii ay la tiriyey sidii ay reerahoodu ahaayeen, lahaa sida madaxda Yecii'eel iyo Sekaryaah.
5:8 Haddaba Belac, oo ahaa ina Caasaas, ina Shemac, oo ahaa ina Yoo'eel, degganaan jiray Carooceer, iyo tan iyo Nebo iyo Bacal Mecoon.
5:9 Oo isna wuxuu ku noolaa xagga dalka bari, iyo tan iyo meesha laga galo cidlada iyo ilaa Webi Yufraad. Waayo,, waxay hantiyeen tiro badan oo xoolo ah ee dalka reer Gilecaad.
5:10 Markaasuu, wakhtigii Saa'uul, ay halkaa kula dagaalameen ka dhanka ah reer Hagrii'iim iyo inuu dilo iyaga. Oo iyana waxay degeen meel oo ka mid ah, ku jirta hoygooda, gobolka oo dhan, in uu doonayo inuu Gilecaad bari ka.
5:11 Runtii,, Wiilashii Gaadna waxay ku noolaa gobolka ka soo horjeeda iyaga ka, ee ah dalka Baashaan, iyo tan iyo Salkaah:
5:12 Joel madaxa, iyo Shaafaam labaad, markaas Yacnay, iyo Shaafaad, oo Baashaan.
5:13 Runtii,, walaalahood, sida ay guryaha Qaraabadooda, ahaayeen: Michael, iyo Meshullaam, iyo Sheba, iyo Yooray, iyo Jacan, iyo Zia, iyo Ceeber, toddoba.
5:14 Oo kuwanuna waxay ahaayeen wiilashii Abiixayil, ina Xuurii, oo ahaa ina Yaaroo'ax, oo ahaa ina Gilecaad, oo ahaa ina Miikaa'eel, oo ahaa ina Yeshiishay, oo ahaa ina Yaxdoo, oo ahaa ina Buus,
5:15 walaalahood la, Wiilashii Cabdii'eel, oo ahaa ina Guunii, Hogaamiyaha guriga, qolooyinkooda,
5:16 Oo waxay degganaayeen Gilecaad, iyo Baashaan iyo magaalooyinkeedii, iyo agagaarkeedii ee Sharon oo dhan, soohdintooda meesha ugu fog ee.
5:17 Kuwanu waxay kulligood ku tiriyey wakhtigii Yootam, ee ahaa boqorkii dalka Yahuudah, iyo wakhtigii Yaaraabcaam, oo wuxuu boqorkii reer binu Israa'iil:
5:18 oo wiilashii Ruubeen, iyo reer Gaad, iyo qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh, rag dagaalyahan ah, siday gaashaammo iyo seefo, iyo foorarsiga qaansada, iyo tababaray dagaalka, afar iyo afartan kun iyo toddoba boqol iyo lixdan,, horumarinta Dagaalka.
5:19 Waxay ku dhibtooday ka dhanka ah reer Hagrii'iim, weli si dhab ah Jetureans ah, iyo reer Naafiish, iyo reer Naadaab gargaarka iyaga ku bixiyeen.
5:20 Markaasaa reer Hagrii'iim waxaa lagu riday gacmihii kuwa, oo dhan oo iyaga la jiray. Waayo, iyagu waxay Ilaah baryay halka ay dagaalkii sameeyey. Oo wuxuu iyagii u hoggaansatay, maxaa yeelay, iyagu isaga isku halleeyey.
5:21 Markaasay kulligood waxay qabteen in ay hantiyeen, of geel ah konton kun, iyo ido ah laba boqol iyo konton kun oo, iyo dameerro ah laba kun, iyo dad tiradiisu tahay boqol kun oo noloshooda.
5:22 Oo qaar badan oo dheceen ku dhaawacmeen. Waayo, waxaa jiray dagaal Rabbiga. Oo iyana waxay degeen meel oo ka mid ah, ilaa transmigration ah.
5:23 Sidoo kale, Wiilashii qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh hantiyeen dalkii, ka qaybo ka mid ah Baashaan, iyo ilaa Bacal, Xermoon, iyo Samir, iyo ilaa Buur Xermoon. Waayo, hubaal, tiradooduna waxay ahayd weyn.
5:24 Oo kuwanuna waxay ahaayeen madaxda guriga Qaraabadooda: Ceefer, iyo Yishcii, iyo Elii'eel, iyo Casrii'eel, iyo Yeremyaah, iyo Hoodawyaah, iyo Yaxdii'eel, rag aad xoog badan iyo awood badan, iyo hoggaamiyayaasha caanka ahaa ee qoysaskooda.
5:25 Laakiinse iyagu waxay ka tageen Ilaaha awowayaashood, oo waxay fornicated ka dib, dadyowga ilaahyadooda oo ka mid ah dalka, kan Ilaah ka qaaday iyaga ka hor.
5:26 Oo sidaas daraaddeed Ilaaha reer binu Israa'iil kiciyey ruuxii ee Fuul, oo wuxuu boqorkii reer Ashuur, iyo ruuxa Tilgad Filneser, iyo boqorkii Ashuur. Oo wuxuu fogeeyey Ruubeen, iyo reer Gaad, iyo qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh. Oo wuxuu iyagii ku hoggaamiyey Xalax, iyo in Xaaboor, iyo in Hara, iyo tan iyo webiga Goosaan ag ahaa, ilaa maantadan la joogo.
6:1 Wiilashii Laawina: Gershoom, Qohaad, iyo Meraarii.
6:2 Wiilashii Qohaadna: Camraam, iyo Isehaar, Xebroon, iyo Cusii'eel.
6:3 Wiilashii Camraamna: Aaron, Muuse, iyo Maryan. Wiilashii Haaruun: Naadaab iyo Abiihuu, Iyo Elecaasaar, iyo Iitaamaar.
6:4 Elecaasaar uuraysatay Fiinexaas, iyo Fiinexaas uuraysatay Abiishuuca.
6:5 Runtii,, Abiishuuca uuraysatay Buqii, oo ah Buqii uuraysatay Cusii.
6:6 Cusii uuraysatay Seraxyaah, iyo Seraxyaah uuraysatay Meraayood.
6:7 Markaas Meraayood uuraysatay Amaryaah, iyo Amaryaah uuraysatay Axiituub.
6:8 Axiituub uuraysatay Saadooq, oo Saadooq uuraysatay Axiimacas.
6:9 Iyo Axiimacas oo wakiil uuraysatay Casaryaah; Casaryaah oo ahaa uuraysatay Yooxaanaan.
6:10 Yooxaanaan uuraysatay Casaryaah. Isagu waa mid ka mid ah kii hawsha wadaadnimada ku jiray gurigii Sulaymaan Yeruusaalem ka dhisay,.
6:11 Haddaba Casaryaah uuraysatay Amaryaah, iyo Amaryaah uuraysatay Axiituub.
6:12 Axiituub uuraysatay Saadooq, oo Saadooq uuraysatay Shalluum.
6:13 Shalluum uuraysatay Xilqiyaah, iyo Xilqiyaah uuraysatay Casaryaah.
6:14 Casaryaah oo ahaa uuraysatay Seraayaah, iyo Seraayaah uuraysatay Yehoosaadaaq.
6:15 Haddaba Yehoosaadaaq tegey, markii Rabbigu qaaday dalka Yahuudah iyo Yeruusaalem, by gacmaha Nebukadnesar.
6:16 Sidaas daraaddeed reer Laawi oo jiray Gershoom, Qohaad, iyo Meraarii.
6:17 Oo kuwanuna waa magacyadii wiilashii Gershoom: Libnii iyo Shimcii.
6:18 Wiilashii Qohaadna: Camraam, iyo Isehaar, iyo Xebroon, iyo Cusii'eel.
6:19 Wiilashii Meraariina: Maxlii iyo Mushii,. Oo sidaas daraaddeed kuwanu waxay leeyihiin xigaalo reer Laawi, sidii ay reerahoodu ahaayeen.
6:20 Oo reer Gershoomna: Libnii, ina, ina dhalay Yaaxad,, Simmaah wiilkiisa,
6:21 Yoo'aax wiilkiisa, wiilkiisii ​​wuxuu, Serax, ina, Ye'ateray ina.
6:22 Wiilashii Qohaadna: Wiilkiisii ​​Cammiinaadaab, Qorax ina, Isna dhalay Asiir,
6:23 Elqaanaah, oo isna dhalay Ebiyaasaaf, Isna dhalay Asiir,
6:24 Isna dhalay Taxad, Uurii'eel oo wiilkiisa, Cusiyaah ina, Shaa'uul.
6:25 Wiilashii Elqaanaahna: Camaasay iyo Axiimood
6:26 iyo Elqaanaah. Wiilashii Elqaanaahna: wiilkiisii ​​Soofay, Nahad wiilkiisa,
6:27 Elii'aab oo ahaa ina, oo isna dhalay Yeroxaam, Elqaanaah.
6:28 Wiilashii Samuu'eelna: Vasseni ahaa curadkii, iyo Abiiyaah.
6:29 Wiilashii Meraariina waxaa ka joogay: Maxlii, Libnii, ina, Shimcii ina, Isna dhalay Cuusaah,
6:30 ina Shimcaa,, oo isna dhalay Xaggiyaah, Casaayaah oo ahaa wiilkiisii.
6:31 Kuwaasu waa kuwa ku badnaa oo Daa'uud ka badan ragga gabya la ballamay ee guriga Rabbiga, meeshii sanduuqa uu ku yaalay.
6:32 Oo iyana waxay teendhadii maragga gabay kaga adeegi jireen ka hor, ilaa Sulaymaan gurigii Rabbiga Yeruusaalem ka dhisay. Oo iyana waxay ku istaagi doono siday u kala horhorreeyeen ee wasaaradda.
6:33 Runtii,, kuwanu waa kuwa ayaa caawinta, carruurtooduba, Wiilashii Qohaadna waxay ka: Heemaan oo gabayaa ahaa, oo ahaa ina Yoo'eel, ina Samuu'eel,
6:34 ina Elqaanaah, oo ahaa ina Yeroxaam, ina Elii'eel, ina Elii'eel,
6:35 ina Suuf, ina Elqaanaah, ina Maxad, ina Camaasay,
6:36 ina Elqaanaah, oo ahaa ina Yoo'eel, oo ahaa ina Casaryaah, ina Sefanyaah,
6:37 ina Taxad, ina Asiir, oo ahaa ina Ebiyaasaaf, ina Qorax,
6:38 ina Isehaar, oo ahaa ina Qohaad, oo ahaa ina Laawi, ina Israa'iil.
6:39 Oo weliba waxaa kaloo jiray walaalkiis, Aasaaf, kuwaas oo ahaa in uu xaq u taagan, Aasaaf, ina Berekyaah, ina Shimcaa,
6:40 oo ahaa ina Miikaa'eel, ina Bacaseeyaah, ina Malkiiyaah,
6:41 ina Etnii, ina Serax, ina Cadaayaah,
6:42 ina Eetaan, ina Simmaah, ina Shimcii,
6:43 ina Yaaxad, oo ahaa ina Gershoom, oo ahaa ina Laawi.
6:44 Haddaba reer Meraarii, walaalahood, ahaayeen bidixda: Eetaan, oo ahaa ina Qiishii, ina Cabdii, ina Malluug,
6:45 ina Xashabyaah, oo ahaa ina Amasyaah, oo ahaa ina Xilqiyaah,
6:46 ina Amsii, ina Boni, ina Shemer,
6:47 ina Maxlii, ina Mushii, ina Meraarii, oo ahaa ina Laawi.
6:48 Sidoo kale waxaa jiray walaalahood, Kuwii reer Laawi waxaa loo doortay inay wasaaradda kasta oo taambuuggii guriga Rabbiga.
6:49 Runtii,, Haaruun iyo wiilashiisii ​​waxaa lagu tiriyey qurbaannada kor dhacay meeshii la gubo iyo girgiraha fooxa wax gubanaya, shuqulkii oo dhan, Quduuskii Quduusyada, iyo inuu ku tukado, oo ku hadlaya magaca Israa'iil, waafaqsan wax walba in Muuse, addoonkii Ilaah, ku amray.
6:50 Haddaba kuwanu waa wiilashii Haaruun: Wiilkiisii ​​Elecaasaar, Wiilkiisa Fiinexaas, Isna dhalay Abiishuuca,
6:51 wiilkiisii ​​kaas oo ah Buqii, Cusii wiilkiisa, Seraxyaah wiilkiisa,
6:52 oo isna dhalay Meraayood, Iyo Amaryaah oo wiilkiisa, Oo isna dhalay Axiituub,
6:53 Saadooq wiilkiisa, Axiimacasna wuxuu wiilkiisii.
6:54 Oo kuwanuna waa rugahoodii ay degganaayeen sida ay tuulooyinka iyo xidha, gaar ah oo ka mid ah wiilashii Haaruun, sida ay xigaalkayaga reer Qohaad,. Waayo, waxaa ku dhacay iyagii saami.
6:55 Oo sidaas daraaddeed, waxay siiyeen Xebroon, ku taal dalka reer Yahuudah, iyo agagaarkeedii ku wareegsanaa oo dhan, iyaga,
6:56 laakiin waxay siiyey magaalada beeraheedii, iyo tuulooyinka, Kaaleeb, oo ahaa ina Yefunneh.
6:57 Markaasuu, Wiilashii Haaruunna, waxay la siiyey magaalooyinkii magangalka: Xebroon, iyo Libnaah iyo agagaarkeedii,,
6:58 sidoo kale Yatiir iyo Eshtemooca iyo agagaarkeedii ay, markaas sidoo kale Xiileen iyo Debiir iyo agagaarkeedii ay,
6:59 iyo sidoo kale Caashaan iyo Beytshemesh iyo agagaarkeedii ay.
6:60 Oo qabiilkii reer Benyaamiin: Iyo Geeraa iyo agagaarkeedii, iyo Calemed iyo agagaarkeedii, iyo sidoo kale Canaatood iyo agagaarkeedii. Dhammaan magaalooyinka oo dhan Qaraabadooda ahaayeen saddex iyo toban.
6:61 Haddaba reer Qohaad, kuwa haray ka Qaraabadooda, waxay siiyeen toban magaalo, ka qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh, sida hanti ah;
6:62 iyo wiilashii Gershoom in, sidii ay reerahoodu ahaayeen, ka qabiilkii reer Isaakaarna, iyo qabiilka reer Aasheer, iyo qabiilka reer Naftaali, iyo qabiilka reer Manaseh oo Baashaan: saddex iyo toban magaalo.
6:63 Markaasaa reer Meraarii, sidii ay reerahoodu ahaayeen, ka heleen qabiilka reer Ruubeen, iyo qabiilka reer Gaad, iyo qabiilka reer Sebulun, saami ahaan ayay magaalooyinkan iyo toban magaalo siiyey.
6:64 Sidoo kale, reer binu Israa'iil siiyey, reer Laawi, magaalo iyo agagaarkoodii bay ahaayeen,
6:65 oo waxay iyagii siiyeen saami, Oo qabiilkii reer Yahuudah ah, Oo qabiilkii reer reer Simecoon, Oo qabiilkii reer reer Benyaamiin, magaalooyinkaas, taas oo ay u yeedheen magacyadoodii.
6:66 Oo kuwii ka sii xaqeeda oo ahaa reer Qohaad, iyo xataa magaalooyinka iyo soohdintoodii bay ahaayeen ka heleen qabiilka reer Efrayim.
6:67 Markaasuu iyaga waxaa la siiyey magaalooyinkii magangalka: Shekem iyo agagaarkeedii, on buuraha leh oo Efrayim, iyo Geser iyo agagaarkeedii,
6:68 iyo sidoo kale Yoqmecaam iyo agagaarkeedii, iyo Beytxooroon la mid ah,
6:69 oo runtii Xiileen iyo agagaarkeedii, iyo Gad Rimmoon iyo si la mid ah.
6:70 Markaasuu aad u, oo qabiil kala bar ka mid ah reer Manaseh oo ahaa: Caaneer iyo agagaarkeedii, Bilcaam iyo agagaarkeedii; kuwaas oo si gaar ah u tageen inay kuwii haray ka sii xaqeeda oo ahaa reer Qohaad.
6:71 Oo reer Gershoomna sidii, ka xigaalo qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh: Golan, oo Baashaan, iyo agagaarkeedii, iyo Cashtarod iyo agagaarkeedii;
6:72 ka qabiilkii reer Isaakaarna: Qedesh iyo agagaarkeedii,, iyo Daaberad iyo agagaarkeedii,
6:73 iyo sidoo kale Raamod iyo agagaarkeedii, iyo Caaneem iyo agagaarkeedii;
6:74 dhab ah, ka qabiilkii reer Aasheerna: Waxaa laga siiyey Maashaal iyo agagaarkeedii, iyo Cabdoon iyo sidoo kale;
6:75 iyo sidoo kale xagga Xuqoq iyo agagaarkeedii, iyo Rexob iyo agagaarkeedii;
6:76 Oo weliba, ka qabiilkii reer Naftaalina: Siiyey Qedesh oo Galili ku taal iyo agagaarkeedii, Xammoon iyo agagaarkeedii, iyo Qiryaatayim iyo agagaarkeedii.
6:77 Markaasaa wiilashii haray reer Meraarii, ka qabiilkii reer Sebulun: Rimmoonoo iyo agagaarkeedii, iyo Taaboor iyo agagaarkeedii;
6:78 iyo sidoo kale, Webi Urdun oo Yerixoo ka soo hor jeedda, u jeedday xagga bari oo Webi Urdun ka mid ah, ka heleen qabiilka reer Ruubeen: Beser oo cidlada ku taal iyo agagaarkeedii, iyo Yahsaah iyo agagaarkeedii;
6:79 iyo sidoo kale Qedemood iyo agagaarkeedii, iyo Mefacad iyo agagaarkeedii;
6:80 Hubaal sidoo kale, ka qabiilkii reer Gaadna: Raamod oo Gilecaad ku taal iyo agagaarkeedii, iyo Maxanayim iyo agagaarkeedii,;
6:81 ka dibna aad u, Iyo Xeshboon iyo agagaarkeedii, iyo Yacser iyo agagaarkeedii.
7:1 Wiilashii Isaakaarna waxay ahaayeen Toolac, iyo Fuwaah, Yaashuub, iyo Shimroon, afar.
7:2 Wiilashii Toolacna waxay ahaayeen: Cusii, iyo Refaayaah, iyo Yerii'eel, iyo Yahmay, iyo Shemuu'eel, iyo Shemuu'eel, Hoggaamiyayaasha sida ay guryaha Qaraabadooda. From ahay jinsiga reer Toolac, waxaa laga tiriyey, wakhtigii Daa'uud, laba iyo labaatan kun iyo lix boqol oo nin oo aad u xoogan.
7:3 Wiilashii Cusii: Yisraxyaah, ka kuwaas oo ku dhashay: Michael, iyo Cobadyaah, iyo Yoo'eel, iyo Yishiyaah; shan dhammu waxay ahaayeen madaxda.
7:4 Oo iyaga waxaa la, qolo qolo iyo dadyowga, waxaa jiray lix iyo soddon kun oo nin oo aad u xoogan, guntisay dagaalka. Oo waxay lahaayeen naago iyo wiilal badan.
7:5 Sidoo kale, walaalahood, oo dhan xigaalo reer Isaakaar, laga tiriyey waxay ahaayeen sida toddoba iyo siddeetan kun, aad taam dagaalka.
7:6 Oo wiilashii Benyaamiin iyo: qurux badan, iyo Beker, iyo Yediica'eel, saddex.
7:7 Oo wiilashii Belac: Esboon, iyo Cusii, iyo Cusii'eel, iyo Yeriimood, iyo Ciirii, shan madaxda qoysaska, Waxa kale oo aad u taam dagaalka; oo tiradooduna waxay ahayd laba iyo labaatan kun iyo afar iyo soddon.
7:8 Haddaba Wiilashii Bekerna: Semiiraah, iyo Yoo'aash, iyo Eliiceser, iyo Eliyooceenay, iyo Coomrii, iyo Yereemood, iyo Abiiyaah, iyo Canaatood, iyo Calemed: oo kulligoodna waxay ahaayeen wiilashii Beker.
7:9 Oo iyagii u tiriyey sidii ay reerahoodu ahaayeen, by madaxda Qaraabadooda, aad u xoog badan in dagaal, iyo labaatan kun iyo laba boqol.
7:10 Oo wiilashii Yediica'eel: Bilhaan, iyo wiilashii Bilhaan: Yecuush, iyo reer Benyaamiin, iyo Eehuud, iyo Kenacanaah, iyo Seetaan, iyo Tarshiish, iyo Axiishaxar.
7:11 Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen farcankii Yediica'eel, madaxda Qaraabadooda, nin aad u xoog badan, toddoba iyo toban kun iyo laba boqol oo, baxay dagaalka u.
7:12 Sidoo kale, Shufiim iyo Xufiim, wiilashii Ciir; iyo Xushiim, ahaa ina Axeer.
7:13 Markaasaa wiilashii Naftaali: Yaxsii'eel, iyo Guunii, iyo Yeser, iyo Shalluum, wiilashii Bilhah.
7:14 Sidoo kale, oo ahaa ina Manasehna: Asrii'eel. Markaasay naagtiisii ​​addoonta ahayd, Suuriya ah, u dhashay Maakiir, oo ahaa Gilecaad aabbihiis.
7:15 Haddaba Maakiirna wuxuu guursaday wiilashiisa, Xufiim iyo Shufiim. Oo isna wuxuu lahaa gabadh walaashiis ah oo la odhan jiray Macakaah; laakiin wiilkii labaad magiciisana waxaa jiray Selaafexaad, oo ay gabdho u dhashaan in ay Selaafexaad.
7:16 Oo Macakaah, oo ahayd Maakiir naagtiisiina, waxay dhashay wiil, oo magiciisiina waxay u bixisay Feresh. Oo waxay magicii walaalkiisii ​​odhan jiray Shereesh. Oo wiilashiisiina waxay ahaayeen Uulaam iyo Raaqem.
7:17 Markaasaa ina Uulaam: Bedaan. Kuwanu waa wiilashii Gilecaad, oo ahaa ina Maakiir, oo ahaa ina Manasehna.
7:18 Oo walaashiis, Regina, u dhashay Iishood, iyo Abiiceser oo ahaa reer, iyo Maxlaah.
7:19 Wiilashii Shemiidaacna waxay ahaayeen Axyaan, iyo Shekem, iyo Liqxii, iyo Aniicaam.
7:20 Oo wiilashii Efrayim,: Shuutelax, Bered ina, Isna dhalay Taxad, oo isna dhalay Elcaadaah, Isna dhalay Taxad, kuwaas oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Saabaad,
7:21 oo wiilkiisii ​​ahaa Shuutelax, oo wiilkiisii ​​ahaa Ceser, iyo sidoo kale Elcaad. Laakiinse nimankii wadaniga Gad, iyagaa dilay, maxaa yeelay, waxay ku dhaadhacday Galay hantidoodii.
7:22 Oo sidaas daraaddeed waxay aabbahood, Efrayim, baroorteen maalmo badan; iyo walaalihiis oo gaaray, sidaa darteed ayay isaga u tacsiyeeyaan laga yaabaa in.
7:23 Oo isna wuxuu ku soo galay si ay naagtiisii; uuraysatay oo waxay dhashay wiil. Oo magiciisiina wuxuu u bixiyey Beriicaah, maxaa yeelay, isagu wuxuu kor u kacay intii lagu jiray waqti of shar ah reerkiisa.
7:24 Haddaba gabadhiisa odhan jiray She'eraah, kii dhisay hoose iyo tan sareba Beytxooroon, iyo sidoo kale weliba Useen She'eraah.
7:25 Oo wuxuu dhalay Refax wiilkiisa, oo isna dhalay Reshef, iyo waxa uu ahaa, kuwaasoo uu ku dhashay Tahan,
7:26 uuraysatay Ladan. Oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Cammiihuud, uuraysatay Eliishaamaac,
7:27 kuwaasoo uu ku dhashay Nuun, oo lahaa Yashuuca ina.
7:28 Haddaba hantidoodii iyo hoygoodiiba waxay ahaayeen: Beytel iyadoo wadata labadii gabdhood, iyo xagga bari, Nacaraan, iyo xagga dalka reer galbeedka, Geser iyo gabdhaheedii, iyo sidoo kale Shekem iyadoo wadata labadii gabdhood, iyo tan iyo Casaah iyadoo wadata labadii gabdhood;
7:29 sidoo kale, reer Manaseh ka soo hadhay, Beytshe'aan iyo gabdhaheedii, Tacanaag iyo gabdhaheedii, Megiddoo iyo gabdhaheedii, Door iyo gabdhaheedii. In meelahan, waxaa degganaa wiilashii Yuusuf, ina Israa'iil.
7:30 Oo wiilashii Aasheer: Yimnaah, iyo Yishwaah, iyo Yishwii, iyo Beriicaah, iyo Serax oo ahayd walaashood.
7:31 Oo wiilashii Beriicaah: Xeber, iyo Malkii'eel, oo taasuna waa Birsaawid aabbihiis.
7:32 Haddaba Xeber oo uuraysatay Yafleed, iyo Shomeer, iyo Xootaam, iyo walaashood Shuucaa.
7:33 The ilma Yafleed: Garaacood, iyo Bimhaal, iyo Cashwaad; kuwanu waa ilma Yafleed.
7:34 Markaasaa wiilashii Shomeer: ahi, iyo Raahgaah, iyo Yehubbaah, iyo Araam.
7:35 Oo wiilashii Xeelem, walaalkiis: waxay ahaayeen Soofax, iyo Yimnaac, iyo Sheelesh, iyo Amal.
7:36 Wiilashii Soofaxna waxay ahaayeen: Suu'ax, Xarnefer, iyo Shuucaal, iyo sii, iyo Yimraah,
7:37 Beser, iyo Xood, iyo Shammaa, and Shilshah, iyo Yitraan, iyo Be'eeraa.
7:38 Wiilashii Yeterna waxay: Yefunneh, iyo Fisfaah, iyo Araa.
7:39 Markaas Wiilashii Cullaana: jihada, iyo Xannii'eel, iyo Risyaa.Oo.
7:40 Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen ilma Aasheer, madaxda qoysaska, la doortay iyo taliyayaashii aad u xoog badan taliyayaasha ka mid ah. Oo tiradii kuwii da'da ah oo la taam u dagaalkayagu waxay ahayd lix iyo labaatan kun.
8:1 Benyaamiinna way uuraysatay Belac oo ahaa curadkiisii ​​sida, Iyo Ashbeel oo labaad, Axrax saddexaad,
8:2 Nooxaah oo ahaa kii afraad ee, iyo Rafaa oo ahaa kii shanaad.
8:3 Oo wiilashii Belac waxay ahaayeen: Addaar, iyo Geeraa, iyo Abiihuud,
8:4 iyo sidoo kale Abiishuuca, iyo Nacamaan, iyo Axoo'ax,
8:5 markaas sidoo kale Geeraa, iyo Shefuufaan, iyo Xuuraam.
8:6 Kuwanu waa wiilashii Eehuud,, Madaxda nool xigaalkayaga Gebac, kuwaas oo ay marti u dhaqaaqay Maanahad.
8:7 Markaasaa Nacamaan, iyo Axiiyaah, iyo Geeraa, Waxa kale oo isna iyagii buu u dhaqaaqay; oo wuxuu uuraysatay Cuusaah iyo Axiixud.
8:8 Markaas Shaxarayimna uuraysatay, ee gobolka reer Moo'aab, ka dib markii uu iska diray naagihiisii ​​ahaa Xushiim iyo Bacaraa, naagihiisii;
8:9 oo sidaas, oo uu naagtiisa ka Xodeshna, Wuxuuna naftiisa ka kasay Yoobaab, iyo Sibyaa, iyo Meeshaa, iyo Malkaam,
8:10 iyo sidoo kale Yecuus iyo Sachia, iyo Mirmaah. Oo kuwanuna waxay ahaayeen wiilashii uu, madaxda qoysaskooda.
8:11 Runtii,, Oo Xushiimna wuxuu ka uuraysatay Abiituub iyo Elfacal.
8:12 Oo wiilashii Elfacal ahaayeen Ceeber, iyo Mishcaam, iyo Shemed, kii dhisay Oonoo iyo Lod iyo gabdho ay.
8:13 Haddaba Beriicaah, iyo Shemac ahaayeen madaxda qoysaskooda ku nool tan iyo Ayaaloon;; kuwaas oo kala eryeen dadkii Gad degganaa.
8:14 iyo Axiyoo, iyo Shaashaq, iyo Yereemood,
8:15 iyo Sebadyaah, iyo Caraad, iyo Ceeder,
8:16 iyo sidoo kale Michael, iyo Yishfaah, iyo Yooxaa, waxay ahaayeen wiilashii Beriicaah.
8:17 Markaas waxaa ka socday Sebadyaah, iyo Meshullaam, iyo Letter, iyo Xeber,
8:18 iyo Yishmeray, iyo Isliyaah, iyo Yoobaab waxay ahaayeen wiilashii Elfacal.
8:19 Markaas Yaaqiim, iyo Sikrii, iyo Sabdii,
8:20 iyo Eliiceenay, iyo Silletay, iyo Elii'eel,
8:21 iyo Cadaayaah, iyo Beraayaah, iyo Shimraad waxay ahaayeen wiilashii Shimcii.
8:22 Markaas Yishfaan, iyo Ceeber, iyo Elii'eel,
8:23 iyo Cabdoon, iyo Sikrii, iyo Xaanaan,
8:24 iyo Xananyaah, iyo Ceelaam, iyo Cantotiyaah,
8:25 iyo Yifdeyaah, iyo Fenuu'eel oo ahaa wiilashii Shaashaq.
8:26 Markaas Shamsheray, iyo Shexaryaah, iyo Catalyaah,
8:27 iyo Yacareshyaah, iyo Eliiyaah, iyo Sikrii oo ahaa wiilashii Yeroxaam.
8:28 Kuwaasu waxay ahaayeen aynu ka soo farcannay iyo madaxda qoysaska kuwaas oo ku nool Yeruusaalem.
8:29 Haddaba Gibecoon, waxaa jiri jiray Yecii'eel, Gibecoon aabbihiis Yecii'eel; iyo magaca oo uu naagtiisa la odhan jiray Macakaah,
8:30 iyo curadkiisii ​​Cabdoon ahaa, iyo Suur, iyo Qiish, iyo Bacal, iyo Naadaab,
8:31 iyo Gedoor, iyo Axiyoo, iyo Seker, iyo Miqlood.
8:32 Miqloodna wuxuu uuraysatay Shime'aah. Oo iyana waxay degeen walaalahood Yeruusaalem ka soo horjeeda, walaalahood.
8:33 Haddaba Neer uuraysatay Qiish, iyo Qiish uuraysatay Saa'uul. Markaasaa Saa'uul wuxuu Yoonaataan ku uuraysatay, iyo Melkiishuuca, iyo Abiinaadaab, iyo Eshbacal.
8:34 Wiilkii Yoonaataanna wuxuu ahaa Meriibacal; Meriibacalna wuxuu uuraysatay Micah.
8:35 Wiilashii Miikaahna waxay ahaayeen Fiitoon, iyo Meleg, iyo Tareeca, iyo Aaxaas.
8:36 Markaasaa Aaxaas dhintay uuraysatay Yehoocaddaahna. Yehoocaddaahna uuraysatay Calemed, iyo Casmaawed, iyo Simrii, Simriina. Oo Simrii uuraysatay Moosaa.
8:37 Moosaana wuxuu uuraysatay Bincaa, kuwaas oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Rafaah,, kuwaas oo ku dhashay Elecaasaah, uuraysatay Aaseel.
8:38 Waxaa jiray lix wiil, waayo, Aaseelna, oo magacyadoodu ahaayeen Casriiqaam, iyo Bokeruu, Ismaaciil, Shecaryaah, Cobadyaah, iyo Xaanaan. Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Aaseel.
8:39 Markaasaa wiilashii Ceesheq, walaalkiis, waxay ahaayeen Uulaam oo curadkiisii ​​wuxuu ahaa, iyo Yecuush labaad, iyo Eliifeled oo ahaa kii saddexaad.
8:40 Oo Wiilashii Uulaamna waxay ahaayeen rag aad u xooggan, barbaro qaansada xoog weyn. Oo waxay lahaayeen wiilal iyo awowe u badan, iyo xataa ilaa boqol iyo konton ka mid ah. Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen reer Benyaamiin.
9:1 Oo sidaas daraaddeed, Israa'iil oo dhan lagu tiriyey. Oo tiriya iyaga ka mid ah waxaa ku qoran kitaabkii boqorrada dalka Israa'iil iyo dalka Yahuudah. Oo iyana waxay la geeyay u kaxaystay Baabuloon, waayo, dhibban yihiin xadgudubkooda aawadiis.
9:2 Haddaba kuwii ugu horreeyey oo degay dalkii ay hantiyeen iyo magaalooyinkoodii waxay ahaayeen reer binu Israa'iil, iyo wadaaddadii, iyo kuwii reer Laawi, iyo reer Netiiniim.
9:3 Joogista Yeruusaalem qaar ka mid ah reer Yahuudah ka ahaayeen, iyo reer Benyaamiin ka soo, iyo sidoo kale wiilashii Efrayim iyo reer Manaseh ka:
9:4 Cuutay, oo ahaa ina Cammiihuud, oo ahaa ina Coomrii, ina Imrii, ina Baanii, Feres wiilashiisiina waxay ka, kan ahaa ina Yahuudah.
9:5 Oo reer Shiilonii: Casaayaah oo ahaa curadkii, iyo wiilashiisii.
9:6 Markaas Wiilashii Seraxna waxay ka: Yecuu'eel, iyo walaalahood, lix boqol iyo sagaashan.
9:7 Oo wiilashii Benyaamiin iyo ka: Sllu, oo ahaa ina Meshullaam, ina Hoodawyaah, ina Hasenu'aah;
9:8 iyo Yibneyaah, oo ahaa ina Yeroxaam; iyo Eelaah, oo ahaa ina Cusii, ina Mikrii; iyo Meshullaam, oo ahaa ina Shefatyaah, ina Recuu'eel, ina Yibniyaah;
9:9 iyo walaalahood oo ahaa sidii ay reerahoodu ahaayeen, sagaal boqol iyo lix iyo konton. Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen madaxda Qaraabadooda, sida ay reerahoodu kala ahaayeen.
9:10 Oo wadaaddadii: Yedacyaah, Yehooyaariib, iyo Yaakiin;
9:11 iyo sidoo kale Casaryaah, oo ahaa ina Xilqiyaah, oo ahaa ina Meshullaam, oo ahaa ina Saadooq, ina Meraayood, ina Axiituub, wadaadka sare ee guriga Ilaah;
9:12 markaas Cadaayaah, oo ahaa ina Yeroxaam, ina Fashxuur, ina Malkiiyaah; iyo Macsay, oo ahaa ina Cadii'eel, ina Yaxseraah, oo ahaa ina Meshullaam, ina Meshilleemiid, ina Immeer;
9:13 iyo sidoo kale walaalahood, Madaxda sidii ay reerahoodu ahaayeen, hal kun iyo toddoba boqol iyo lixdan,, nin waayo-aragnimo aad u xoog badan, waayo, xagga shuqulka adeegidda guriga Ilaah.
9:14 Markaasaa reer Laawi: Shemacyaah, oo ahaa ina Xashuub, ina Casriiqaam, ina Xashabyaah, oo ahaa reer Meraarii;
9:15 iyo sidoo kale Baqbaqar nijaarkii; iyo Gaalaal; iyo Matanyaah, oo ahaa ina Miikaa, ina Sikrii, ina Aasaaf;
9:16 iyo Cobadyaah, oo ahaa ina Shemacyaah, ina Gaalaal, oo ahaa ina Yeduutuun; iyo Berekyaah, oo ahaa ina Aasaa, ina Elqaanaah, kuwaas oo ku noolaa iridda reer Netofaah.
9:17 Haddaba iridjoogayaashiina waxaa ka joogay Shalluum,, iyo Caquub, iyo Talmon, iyo Axiiman; iyo Walaalkood Shalluum wuxuu ahaa madaxdii.
9:18 Waayo, ilaa wakhtigaas, iridda boqorka bari, Wiilashii Laawina waxay u adeegeen in markooda ay.
9:19 Runtii,, Shalluum, ina Qore, oo ahaa ina Ebiyaasaaf, ina Qorax, walaalihiis iyo reerkii aabbihiis oo, kuwaas oo ahaa reer Qorax, waxay u talin jireen shuqullada Wasaaradda xajiya vestibules taambuugga. Iyo qoysaskooda, in markooda, waxay ahaayeen waardiyayaashii iridda xerada Rabbiga.
9:20 Haddaba Fiinexaas, oo ahaa ina Elecaasaar, taliyaha ay Rabbiga hortiisa ku.
9:21 laakiin Sekaryaah, ina Meshelemyaahna wuxuu ahaan, oo ahaa kii dhawri jiray Iridda taambuugga maragga.
9:22 Oo intaas oo dhammu, doortay irid-dhawryadii, waayo, irdaha, waxay ahaayeen laba boqol iyo laba iyo toban. Oo iyana waxay la diiwaan geliyey magaalooyinka iyaga u gaar ah, kuwaad David, oo wax arke ahaa Samuel, magacaabay, in ay Iimaan,
9:23 sida iyaga la, sidaas oo kale ayaa la wiilashooda, at irdaha guriga Rabbiga iyo taambuugga, by markooda ay.
9:24 At afarta jiho, halkaas waxay ahaayeen irid-, in uu yahay, at bari, iyo galbeed, iyo xagga woqooyi,, iyo xagga koonfureed.
9:25 Haddaba walaalahood joognay tuulooyinka, oo ay soo gaareen sabtida ay, waqti ka waqti.
9:26 Si afartaas reer Laawi waxaa Yuhuudda lagu ammaaneeyey tirada dhan irid, oo waxay u talin jireen qolalka oo guryihii wax lagu kaydiyey ee guriga Rabbiga.
9:27 Waxay ku nagaadeen soo jeedo oo ay, on dhinacyada oo dhan macbudka Rabbiga, si, Oo markii wakhtigii ay soo gaareen, inay irdaha furo subaxdii.
9:28 Qaar ka mid ah ka sii xaqeeda ay sidoo kale u talin jireen weelasha lagu adeego. Waayo, weelashii lagu dhex labada qaadeen oo ay fuliyeen sida ay tahay tirada.
9:29 Oo iyaga qaarkood kalena waxaa Yuhuudda lagu ammaaneeyey qalabka meesha quduuska ah; waxayna ahaayeen kuwo mas'uul ka ah bur sarreenkii wanaagsan, iyo khamriga, iyo saliidda, iyo fooxa, iyo xabakta ah.
9:30 Haddaba wiilashii wadaaddada ka xabakta ka kooban cadar ah.
9:31 Oo Matityaah, reer Laawi ah, oo ahaa curadkii Shalluum oo ahaa reer Qorax shuqulkiisii, wuxuu ahaa mas'uul ka ah waxyaalaha ayaa la kariyay ee maqlaha a.
9:32 Haddaba qaar ka mid ah wiilashii Qohaad, walaalahood, waxay u talin jireen kibistii tusniinta, si ay had iyo goor si ay u diyaariyaan kan cusub, waayo, sabtida kasta.
9:33 Kuwanu waa hoggaamiyeyaasha ragga gabya ah, sida ay qolooyinkii reer Laawi, kuwaas oo ku dhex jira qolalka, si ay u fuliyaan laga yaabaa in ay wasaaradda iyo goorba, habeen iyo maalinba.
9:34 The madaxdii reer Laawi, Madaxda sidii ay reerahoodu ahaayeen, Yeruusaalem buu joogay.
9:35 Haddaba Gibecoon, waxaa jiri jiray Yecii'eel, Gibecoon aabbihiis Yecii'eel, iyo magaca oo uu naagtiisa la odhan jiray Macakaah.
9:36 Curadkiisii ​​Cabdoon ahaa, iyo Suur, iyo Qiish, iyo Bacal, oo Neer, iyo Naadaab,
9:37 iyo sidoo kale Gedoor, iyo Axiyoo, iyo Sekaryaah, iyo Miqlood.
9:38 Markaas Miqlood uuraysatay Shime'aam. Kuwaas waxaa ku noolaa walaalahood Yeruusaalem ka soo horjeeda, walaalahood.
9:39 Haddaba Neer uuraysatay Qiish, iyo Qiish uuraysatay Saa'uul. Markaasaa Saa'uul wuxuu Yoonaataan ku uuraysatay, iyo Melkiishuuca, iyo Abiinaadaab, iyo Eshbacal.
9:40 Wiilkii Yoonaataanna wuxuu ahaa Meriibacal. Meriibacalna wuxuu uuraysatay Micah.
9:41 Wiilashii Miikaahna waxay ahaayeen Fiitoon, iyo Meleg, iyo Taxreeca, iyo Aaxaas.
9:42 Markaasaa Aaxaas dhintay uuraysatay Yacraahna. Yacraahna wuxuu dhalay Calemed uuraysatay, iyo Casmaawed, iyo Simrii, Simriina. Markaas Simrii uuraysatay Moosaa.
9:43 Runtii,, Moosaana wuxuu uuraysatay Bincaa, wiilkeeda, Refaayaah, uuraysatay dhalay Elecaasaah, ka kuwaas oo ku dhashay Aaseel.
9:44 Haddaba Aaseelna wuxuu lahaa lix wiil, oo magacyadoodiina waa: Casriiqaam, iyo Bokeruu, Ismaaciil, Shecaryaah, Cobadyaah, Iyo Xaanaan. Kuwanu waa wiilashii Aaseel.
10:1 Haddaba reer Falastiin waxay ahaayeen dagaalka ka dhanka ah Israa'iil, iyo raggii reer binu Israa'iil ka carareen reer Falastiin, oo waxay dheceen ku dhaawacmeen on Buur Gilboca.
10:2 Oo reer Falastiinna markay maqleen soo dhowaadaan, raad Saa'uul iyo wiilashiisii, iyagu waxay u soo dhuftay Jonathan, iyo Abiinaadaab, iyo Melkiishuuca, oo ahaa Saa'uul wiilashiisii.
10:3 Oo dagaalkiina culus koray oo Saa'uul. Oo waxaa isagii gaadhay qaansoleydii helay, oo waxay isagii ku dhaawacmeen fallaadho.
10:4 Markaasaa Saa'uul wuxuu kii hubka u siday ku yidhi: "Unsheathe seeftaada oo i dil. Haddii kale, kuwaas oo niman aan la gudin imaan kartaa oo aad igu majaajiloodo. "Laakiinse kii hubka u siday wuu diiday, iyagoo ah kuwii lagu dhuftay cabsi. Oo sidaas daraaddeed, Saa'uul qabsaday seeftiisii, oo isna wuxuu ku dul dhacay.
10:5 Oo markii kii hubkiisa u sidayna waxaas arkay, si gaar ah, in Saa'uul dhintay, uu hadda ku dul dhacay seeftiisii ​​sidoo kale, wuuna dhintay.
10:6 Sidaa darteed, Saa'uul wuxuu u dhintay, iyo saddexdiisii ​​wiil taktay, iyo reerkii oo dhan u dhacay, wada.
10:7 Markaasay raggii reer binu Israa'iil, kuwaas oo ku nool bannaanka waxaas arkay, ayay carareen. Oo tan iyo markii Saa'uul iyo wiilashiisii ​​ay dhinteen, ayay magaalooyinkoodii ka tageen oo kala firidhsanaayeen, halkan iyo halkaas. Oo reer Falastiinna waxay soo gaadhay iyo iyaga dhex socdayba.
10:8 Markaasuu, maalinta ku xigta, markii reer Falastiin waa la iska qaato hadhaagii laayay, waxay heleen Saa'uul iyo wiilashiisii, been on Buur Gilboca.
10:9 Oo markay isaga ka dheceen, iyo wada jaray madaxiisa, oo ay ka furteen oo hubkiisa, Intay waxyaalahaas ku galay dalka diray, sidaa darteed ayay la agagaarka qaadeen lahaa iyo soo bandhigay ee macbudyo sanamyada iyo dadkiiba.
10:10 Laakiinse kii hubka u waxay quduus ka dhigay in Asheeraah ee ilaahood, iyo madaxiisa ay sumadooda in gurigii Daagoon.
10:11 Markii dadkii reer Yaabeesh Gilecaad maqlay this, si gaar ah, waxyaalihii ay reer Falastiin Saa'uul ku sameeyeen oo ku saabsanaa,
10:12 oo mid kasta oo ka mid ah rag xoog badan kacay, oo waxay qaateen Saa'uul meydkiisii ​​iyo meydadkii wiilashiisa. Oo waxay iyagii keeneen Yaabeesh. Markaasay lafahoodii waxay ku aaseen geedkii Yaabeesh ku yiil. Oo way soomeen intii toddoba maalmood ah.
10:13 Saasaana Saa'uul u dhinto Dembiyadooda oo, maxaa yeelay, wuxuu gacan geliyey amarkii Rabbiga oo uu ku amray, oo ma uu sii. Oo weliba, xitaa wuxuu la arrinsaday naag waxsheegaha a;
10:14 waayo, ma uu Rabbigaan ku kalsoonahay. Taas darteed, wuxuu ka dhigay uu dhintay, oo isna intuu boqortooyada u wareejiyey Daa'uud, kan ahaa ina Yesay.
11:1 Markaas oo dhan reer binu Israa'iil ahaa Daa'uud ugu soo shireen Xebroon, oo wuxuu ku yidhi: "Waxaan nahay laftaada iyo jidhkaaga.
11:2 Sidoo kale, shalay iyo maalintii ka hor, markii Saa'uul weli boqor ku ahaa, aad ahaayeen mid ka mid ah soo saaray oo keenay in Israa'iil. Waayo, Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu kugu yidhi: Waa inaad dadkayga Israa'iil Daajiya, oo waxaad noqon doontaa hogaamiyaha iyaga u taliya. ' "
11:3 Sidaa darteed, oo dhan ka weyn u dhashay Israa'iil wuxuu u kacay boqorkii Xebroon. Markaasaa Daa'uud sameeyey heshiis ah iyaga la Rabbiga hortiisa. Oo iyana waxay isagii wuu subkay inuu boqor u ahaado reer binu Israa'iil, waafaqsan ereyga Rabbiga ah, taas oo uu u soo dhiibay Samuu'eel ka hadlay.
11:4 Markaasaa Daa'uud iyo reer binu Israa'iil oo dhan Yeruusaalem u kacay. waxaa isku mid ah Yebuus, halkaas oo reer Yebuus, dadka dalka deggan oo ah, ahaayeen.
11:5 Oo kuwa la nool Yebuus wuxuu Daa'uud ku yidhi: "Ma halkan soo geli doonaa." Laakiin David qabsaday qalcaddii Siyoon, taas oo ah magaaladii Daa'uud.
11:6 Oo isna wuxuu yidhi, "Ku alla kii marka hore reer Yebuus laayaa wuxuu ku dhufan doonaa, waxaad noqon doontaa taliyaha iyo taliyaha. "Oo sidaas daraaddeed Yoo'aab, oo ay Seruuyaah dhashay, marka hore uguma, oo wuu hogaamiyaha.
11:7 Markaasaa Daa'uud wuxuu jiray dhufayskii, iyo sabab this waxaa la odhan jiray City ee David.
11:8 Oo wuxuu dhisay magaalada hareeraheedii, iyo tan iyo Millo ilaa dhankeeda kasta. Laakiin Yoo'aab dhisay inta kale ee magaalada.
11:9 Markaasaa Daa'uud sii horumarinta iyo kordhinta, oo waxaa isaga la jiray Rabbiga ciidammadu.
11:10 Kuwanu waa madaxda nimanka xoogga Daa'uud, bal yaa isaga u caawisay, oo sidaas daraaddeed ayuu boqorkii noqon lahaa oo dhan reer binu Israa'iil, waafaqsan ereyga Rabbiga ah, oo uu la hadlay reer binu Israa'iil.
11:11 Iyo tirada reer binu adag ee David waa this: Yaashaabcaam, ee ahaa reer Xakmoonii, Hogaamiyaha soddonka ka mid ahaa. Kor buu wuxuu warankiisa u qaaday saddex boqol ka badan, kuwaas oo ay ku dhaawacmeen hal mar.
11:12 Oo isaga dabadiisna, waxaa jiray Elecaasaar, ina adeerkiis, Axoo'ax, oo saddex kuwa awood badan ku dhex jiray.
11:13 Oo isagu wuxuu Daa'uud la joogay Fasdammiim, markay reer Falastiin u soo ururay meeshii in dagaalka. Haddaba duurka oo ka mid ah gobolka in uu ahaa oo shaciir ka buuxo, laakiin dadkii ka reer Falastiin carareen.
11:14 Nimankanu dhexda istaagay oo berrinka dhexdiisa, oo waxay ku difaacay. Oo markii ay reer Falastiin ku laynayay, Rabbigu u siiyey isaga badbaado u weyn in dadka uu.
11:15 Kolkaasaan saddex ka soddonkii madaxda degay dhagixii weynaa ee Daa'uud joogay, in godkii Cadullaam, markay reer Falastiin u sameeyey xerada ku dooxadii Refaa'iim ku.
11:16 Haddaba Daa'uud wuxuu ku jiray dhufayskii a, oo xeradii ciidanka reer Falastiin waxay ahayd Beytlaxam.
11:17 Oo markaas Daa'uud wuxuu doonay oo wuxuu ku yidhi, "O haddii oo kaliya qof ii siin lahaa biyaha ceelka Beytlaxam ka, oo waa iriddii!"
11:18 Sidaa darteed, Saddexdaas dhex qarxay dhexdeeda xeradii reer Falastiin ka, oo waxay biyo ceelka Beytlaxam ee ka soo dhaamiyeen, taas oo ahayd iriddii. Oo iyana way qabsadeen David inay, si uu cabbaan. Laakiin wuu diiday; iyo halkii, wuxuu u bixiyey sidii cabniinka ah Rabbiga u,
11:19 oo wuxuu ku yidhi: "Yaanay noqon inaan ka, aan samayn hortiisa Ilaahayga, iyo inaan ka cabbo lahaa dhiiggii nimankan. Waayo, biimayno noloshooda iyaga u gaar ah, waxay biyaha ii. "Oo sababtaas keenay, wuu diiday inuu cabbo. Saddexda ugu awooda badan wax intaas dhammaysid.
11:20 Sidoo kale, Abiishay, oo Yoo'aab walaalkiis ahaa, wuxuu ahaa madaxdii reer saddex ah, oo wuxuu warankiisa u qaaday saddex boqol oo, kuwaas oo ay ku dhaawacmeen. Oo isna wuxuu ku dhex saddex ahaa caan ugu,
11:21 oo uu ka mid ahaa saddex labaad iyo hogaamiyaha caanka ku ahaa. Oo weliba sida runta ah, ma uusan gaari iyo ilaa saddexdii hore.
11:22 Benaayaah, ina Yehooyaadaac, ka Qabse'eel, wuxuu ahaa nin aad baaluq, kuwaas oo dhammaadeen camal badan. Waxa uu ka Moo'aab laayay laba libaax oo Ilaah. Oo isna wuxuu ku soo degay oo libaax dhexe ee god dilay, oo wakhtiga barafka.
11:23 Oo isna wuxuu ku dhuftay nin Masri ah, kuwaas oo dherer wuxuu ahaa shan dhudhun, iyo kuwa ku haystay waran le'ekayd dharsameeyaha looxiisa ee. Oo weliba wuxuu soo degay isagii ku shaqaalaha a. Oo isna wuxuu ku qabteen waranka in uu haysta oo gacanta ugu jira. Oo isna wuxuu isagii ku dilay warankiisii.
11:24 waxyaalahaas la sameeyey by Benaayaah, ina Yehooyaadaac, oo ahaa saddex kuwa xooggan ka mid ah ugu caan,
11:25 ugu horeysay oo soddonka ka mid. Oo weliba sida runta ah, isagu ma gaadho ilaa saddex ah. Markaasaa Daa'uud wuxuu isagii kaalinta dheg buu ka soo hadhay.
11:26 Waxaa intaa dheer, ragga xoogga badan ee ciidanka ahaayeen Casaaheel, oo Yoo'aab walaalkiis ahaa; oo Elxaanaan, ina adeerkiis, Beytlaxam;
11:27 Shammood, iyo reer Xarod; iyo Xeles, oo ahaa reer Feloonii a;
11:28 iyo Ciiraa, ina Ciqeesh oo ahaa, Teqooca a; iyo Abiiceser oo ahaa, Canaatood ah;
11:29 iyo Sibbekay, Xushaad a; Ciilay, Axoo'ax;
11:30 iyo Maharay oo ahaa, oo ahaa reer Netofaah a; iyo Xeeled, ina Bacanaah oo ahaa, oo ahaa reer Netofaah a;
11:31 Itha, ina Riibay, ka Gibecaah, oo ahaa reer Benyaamiin; Benaayaah, oo ahaa reer Fircaatoon;
11:32 Yuhuudda, ilaa durdurkii Gacash; Abii'eel, reer Caraabaah ah; iyo Casmaawed, Baxuuriim a; iyo Elyaxbaa, Shacalbiim a.
11:33 Wiilashii Rabbiga, Gisonii a: Jonathan, ina Shaagee, oo ahaa reer Haraarii a;
11:34 iyo Axiyaam, ina Sachar, oo ahaa reer Haraarii a;
11:35 Imphal, oo ahaa ina Uur;
11:36 Heefer, Mekeeraatii a; Axiiyaah, oo ahaa reer Feloonii a;
11:37 Hazro, Karmel a; Nhra, oo ahaa ina Esbay;
11:38 Joel, oo ahaa Naataan walaalkiis; iyo Mibxaar, oo ahaa ina Hagrii;
11:39 iyo Seleq, oo ahaa reer Cammoon ah; Nacaray, Bi'irod a, kii hubkiisa u jiray Yoo'aab oo ay, oo ay Seruuyaah dhashay;
11:40 iyo Ciiraa, Yeter ah; Gaareeb, Yeter ah;
11:41 Uuriyaah, reer Xeed; Saabaad, oo ahaa ina Axlay;
11:42 iyo Cadiinaa, oo ahaa ina Shiisaa oo, Ruubeen a, oo amiir u ahaa reer Ruubeen, iyo soddon isaga la jiray;
11:43 Iyo Xaanaan, oo ahaa ina Macakaah; iyo Yehooshaafaad, oo ahaa reer Mitnii a;
11:44 Cusiyaah, Cashteraatii ah; Shamac, iyo Yecii'eel, oo ahaa wiilashii Xootaam, reer Carooceer ah;
11:45 Yediica'eel, oo ahaa ina Shimrii; iyo Yooxaa, walaalkiis, qoladoodu ahayd reer Tiisii;
11:46 iyo Elii'eel, oo ahaa reer Maxawiim a; iyo Yeriibay, iyo Yooshawiyaah, oo ahaa wiilashii Elnacam; iyo Yitmaah, reer Moo'aab; iyo Elii'eel, isaga iyo Cobeed, iyo Yacasii'eel oo ahaa reer Mesobaayaah ka.
12:1 Sidoo kale, kuwaas oo Daa'uud ugu tegey Siiqlag, intuu weli ka cararaya Saa'uul ka, oo ahaa ina Qiish. Oo waxay ahaayeen dagaalyahanno aad u xoog badan oo distinguished,
12:2 laabaya qaansada, iyo isticmaalayo gacanta dhagaxyo tuuraya la wadhfiyo, fallaadhona. Laga soo bilaabo ahaa Saa'uul walaalihiisna, reer Benyaamiin:
12:3 Hogaamiyaha ahaa Axiiceser, la Yoo'aash, Wiilashii Shemaacaah oo ka Gibecaah, iyo Yesii'eel iyo Feled, wiilashii Casmaawed, iyo Barako iyo Yeehuu, ka Canaatood.
12:4 Sidoo kale, waxaa jiray Yishmacyaah, Gibecoon, ee soddonkii ka mid ah oo soddonka ka wada sarreeyey ugu adag; Jeremiah, iyo Yaxasii'eel, iyo Yooxaanaan, iyo Yoosaabaad, ka Gedeeraah;
12:5 iyo Elcuusay, iyo Yeriimood, iyo Becalyaah, iyo Shemaryaah, iyo Shefatyaah, Haruphites ah;
12:6 Elqaanaah, iyo Yishiyaah, iyo Casareel, iyo Yooceser, iyo Yaashaabcaam, ka Carehim;
12:7 iyo sidoo kale Yooceelaah iyo Sebadyaah, wiilashii Yeroxaam, ka Gedoor.
12:8 Markaasuu aad u, ka Gaad, waxaa mareen Daa'uud u, markii uu ku dhuumanayay oo lamadegaanka ku yaal, rag aad u xooggan, oo waxay ahaayeen Xarakada fiican, qabtay oo waran iyo gaashaan; wejiyadooduna waxay u ekaayeen wejiyo libaax, oo waxay u dheereeyeen sida cawsha buuraha ku dul.
12:9 Ceser wuxuu ahaa madaxdii, Cobadyaah labaad, Elii'aabna kii saddexaad,
12:10 Mishmannaahna kii afraad, Yeremyaahna kii shanaad,
12:11 Catayna kii lixaad, Iyo Elii'eel oo ahaa kii toddobaad,
12:12 Yooxaanaanna kii siddeedaad, Elsaabaadna kii sagaalaad,
12:13 Yeremyaahna kii tobnaad, Makbannayna kii kow iyo.
12:14 Kuwaasu waxay ahaayeen reer Gaad ka, madaxda ciidanka. ugu yaraan waxa uu ahaa mas'uul ka ah mid ka mid boqol oo askar ah, iyo ugu weyn wuxuu ahaa mas'uul ka ah hal kun.
12:15 Kuwani waa kuwa ku gudbeen Webi Urdun bishii kowaad, marka waxaa la caadaysteen in ay qarqin qararkiisa. Oo iyagu waxay kala eryeen kuwa joogi jireen dooxooyinka oo dhan, gobolka bari iyo galbeed.
12:16 Markaas qaar ka Benyaamiin iyo reer Yahuudah ka weliba qalcaddii ku yimid Daa'uud ayaa la sii joogi.
12:17 Markaasaa Daa'uud u baxay inuu iyaga ka hor tago, oo isna wuxuu yidhi: "Haddii aad si nabad ah soo gaaray, si ay u noqon i caawin, waxaa laga yaabaa in qalbigaygu ha idinku darmadeen; laakiinse haddaad i gacangelin inaad cadaawayaashayda, in kastoo aan lahayn xumaanu gacmahayga, laga yaabaa in Ilaaha awowayaasheen taas ha fiiriyo oo garsoore. "
12:18 Runtii,, Ruuxa degay Camaasay, hogaamiyaha soddonka ka mid ahaa, oo isna wuxuu yidhi: "O David, Annagu waxaannu nahay idinkaa! O ina Yesay, Annagu waxaannu nahay idiin! Peace, nabad ku, iyo nabad gargaarana aad. Waayo, Ilaah idin Gargaaro. "Sidaas darteed, Daa'uud iyagii soo dhoweeyey, oo wuxuu iyaga ku magacaabay hoggaamiyayaasha ciidamada.
12:19 Waxaa intaa dheer, qaar ka mid ah ka Manaseh gudbay Daa'uud u, marka wuu ka baxay oo reer Falastiin oo Saa'uul, si uu ula dagaalamaan laga yaabaa in. Laakiin ma uu iyaga la dagaalamaan. Waayo, Madaxda reer Falastiin, qaadashada talada, u diray, oo wuxuu ku yidhi, "Si aan biimayno madaxana aannu u gaar ah, ayuu ku noqon doonaa in sayidkiisu, Saa'uul. "
12:20 Oo sidaas daraaddeed, markii uu ku soo laabtay Siiqlag, qaar ka mid ah cararay isagii u soo gudbay ka Manaseh: Cadnaah, iyo Yoosaabaad, iyo Yediica'eel, iyo Michael, iyo Cadnaah, iyo Yoosaabaad, iyo Eliihuu, iyo Silletay, Madaxda kun reer Manaseh.
12:21 Kuwani gargaar bixiyeen David inay ka dhanka ah tuugagga ku. Waayo, kulligood waxay ahaayeen rag aad u xoog badan, oo waxay noqdeen madaxda ciidanka.
12:22 Markaasuu, aad, qaar ka mid ah baa Daa'uud u yimid maalinta oo dhan, si ay isaga caawin, ilaa ay ka noqday tiro badan, oo ah sidii ciidanka Ilaah.
12:23 Hadda tiro ka mid ah madaxda ciidanka, kuwaas oo Daa'uud ugu tegey markii uu ahaa Xebroon, kanu waa, sidaas inay boqortooyada Saa'uul isaga u rogaan, waafaqsan ereyga Rabbiga ah:
12:24 Oo wiilashii Yahuudah, siday oo waran iyo gaashaan, lix kun iyo siddeed boqol, qalabaysan dagaalka;
12:25 Wiilashii Simecoonna waxay ka, nin aad u xoog badan, waayo, dagaalka, toddoba kun iyo boqol;
12:26 Wiilashii Laawina waxay ka, afar kun iyo lix boqol;
12:27 iyo sidoo kale Yehooyaadaac, hoggaamiye ka ahay jinsiga reer Haaruun, oo waxaa isaga la jiray saddex kun iyo toddoba boqol;
12:28 ka dibna Saadooq, dhallinyaro ah oo ka mid ah tayada distinguished, iyo reerkii aabbihiis, laba iyo labaatan madaxda;
12:29 iyo reer Benyaamiin ka soo, ahaa Saa'uul walaalihiisna, saddex kun, Waayo, weli qayb weyn oo ka mid ah ayaa ka dib markii reerkii Saa'uul.
12:30 Markaasaa wiilashii Efrayim, oo ka, waxaa ku jiray labaatan kun iyo siddeed boqol, nin aad u xoog badan oo adag, ka mid ah Qaraabadooda caan.
12:31 Oo qabiilkii badh ka mid ah reer Manaseh oo ahaa, siddeed iyo toban kun, kasta magacyadoodii, baxay si ay u yaabaa in David magacaabi jiray sidii boqor.
12:32 Sidoo kale, Wiilashii Isaakaarna waxay ka, waxaa jiray niman ku bartay, kuwaas oo mid kasta oo xilliyada yiqiin, si ay u saadaaliyaan waxa reer binu Israa'iil waajibka ku ah inay sameeyaan, laba boqol oo ah hoggaamiyayaasha. Oo inta ka dhiman qabiilka oo dhan ayaa la socda taladoodii.
12:33 Markaasuu, ka Sebulun, waxaa kaloo jiray kuwo u bexeen inay dagaal, iyo kuwaas oo taagan line dagaal, diyaarshay, hubka dagaalkayagu; kuwaas oo konton kun gaaray si ay u caawiyaan, aan khiyaanadooda qalbiga.
12:34 Oo reer Naftaalina, waxaa jiray hal kun oo madaxda; oo waxaa iyaga la jiray toddoba iyo soddon kun, diyaariyey oo waran iyo gaashaan la.
12:35 Ka dibna laga bilaabo Daan, waxaa jiray siddeed iyo labaatan kun iyo lix boqol, dagaal isu diyaariyey,.
12:36 Oo Aasheer, halkaas waxay ahaayeen afartan kun, baxay si ay ula dagaalamaan, iyo yeeray line dagaalka ku.
12:37 Markaasuu, Webi Urdun shishadiisa, waxaa jiray, oo wiilashii Ruubeen oo ka, iyo reer Gaad, iyo qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh, boqol iyo labaatan kun, diyaarshay, hubka dagaalkayagu.
12:38 Oo kulli intaas oo raggii dagaalka, qalabeeyo dagaalka, tegey qalbi qumman Xebroon, si ay David dhigay boqor u taliya reer binu Israa'iil oo dhan. Markaasuu, aad, inta ka dhiman Israa'iil oo dhammuna wuxuu ahaa isku qalbi, si ay u dhigo Boqor Daa'uud.
12:39 Oo waxay ahaayeen in meel in David leh muddo saddex maalmood ah, wax cunaya oo cabbaya. Waayo, walaalahood sameeyey diyaarinta iyaga u.
12:40 Waxaa intaa dheer, kuwii dhowaan iyagii, xataa ilaa reer Isaakaar, iyo reer Sebulun, iyo reer Naftaali, keeneen, dameerro iyo geel, iyo baqlo, iyo dibi, cunto raashin ay, hadhuudh, berde qalajiyey, canab qalajiyey, khamri, saliidda, iyo dibi iyo ido, la faro badan oo dhan. Waayo,, dhexdooda farxad baa jirtay Israa'iil.
13:1 Markaasaa Daa'uud wuxuu la arrinsaday tribunes ah, iyo boqol-, iyo hoggaamiyayaasha oo dhan.
13:2 Oo isna wuxuu shirkii oo dhan reer binu Israa'iil ku yidhi: "Haddii aad raalli, iyo haddii erayada aan ku hadlo wax ka yimaadaan Rabbiga Ilaaheenna ah, ha noo soo diraan si ay u dhiman ee walaalaha, ee dhammaan gobollada Israa'iil, iyo wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi, kuwaas oo ku nool agagaarka magaalooyinka, sidaa darteed waxaa laga yaabaa in ay soo ururiyaan noo.
13:3 Oo aynu soo celin sanduuqii Ilaaheenna. Waayo, annagu ma doondoona inta lagu jiro wakhtigii Saa'uul. "
13:4 Oo dadkii badnaa oo dhan ku jawaabay in ay tahay in la qabto. Waayo, hadalka ayaa la wanaagsanaa dadkii oo dhan.
13:5 Sidaa darteed, David dhan ku soo ururshay reer binu Israa'iil, ka iyo Shiixoor oo ah durdurka Masar iyo xataa meesha laga galo Xamaad, si ay u sanduuqii Ilaah ka soo qaaday Qiryad Yecaariim.
13:6 Markaasaa Daa'uud wuxuu la kulli raggii reer binu Israa'iil si ay buuraha leh oo reer uguma Qiryad Yecaariim, taas oo ku taal dalka Yahuudah, sidaas inuu ka halkaas sanduuqii Rabbiga ah Ilaaha keeno, dul taagay Keruubiim fadhiya, halkaas oo magiciisana waxaa la gawraco.
13:7 Oo iyana waxay gaadhi cusub sanduuqii Ilaah ka soo qaaday gurigii Abiinaadaab. Markaas Cuusaah iyo Walaalkiis eryay gaadhigii.
13:8 Haddaba Daa'uud iyo reer binu Israa'iil oo dhan ayaa Ilaah hortiisa ku cayaaraya, oo dhan ee ay awoodaan, in songs, iyo kataarado, iyo shareerado,, iyo dafaf, iyo suxuun laysku garaaco, iyo turumbooyin.
13:9 Oo markay gaadheen lagu tumi jiray oo Kiidon, Cuusaah gacanta ku fidiyey, sidaa darteed laga yaabo in uu taageero sanduuqa. Waayo,, iyagoo ku baaqaya dibiga lahaa waxaa wax yar u jeediya.
13:10 Oo sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu u cadhooday Cuusaah. Oo isna wuxuu ku dhuftay maxaa yeelay, wuxuu taabtay sanduuqa. Oo isna halkaasuu Rabbiga hortiisa ku dhinteen.
13:11 Oo Daa'uudna aad buu uga xumaaday, maxaa yeelay, Rabbigu ku kala qaybsan Cuusaah. Oo meeshaas 'Division of Cuusaah isna wuxuu u yeedhay,'Ilaa maantadan la joogo.
13:12 Markaasuu wuxuu Ilaah bay ka cabsadeen, wakhtigaas, oo wuxuu ku yidhi: "Sidee ayaan u awoodaan in ay keenaan in sanduuqii Ilaah naftayda u noqon doonaa?"
13:13 Oo Sababtan awgeed, ayuu ma keeno ayuu naftiisa u, in uu yahay, galay magaaladii Daa'uud. Halkii, inuu ku soo leexday inuu gurigii Cobeed Edoom, reer Gad.
13:14 Sidaa darteed, laakiinse sanduuqii Ilaah wuxuu degganaa gurigii Cobeed Edoom muddo saddex bilood ah. Markaasaa Rabbigu wuxuu gurigiisa iyo wixii uu haystay oo dhan u duceeyey.
14:1 Sidoo kale, Xiiraam, ee ahaa boqorkii Turos, diray Daa'uud wargeeyayaal u soo, iyo qori kedar ah, iyo farsamayaqaanno derbiyada iyo kuwo qoryo ah, si ay guri u waayo, iyagu dhisin.
14:2 Oo Daa'uudna wuxuu ogaaday in Rabbigu isaga u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer binu Israa'iil, iyo in boqortooyada la kor u ahaatid dadkiisa reer binu Israa'iil oo.
14:3 Sidoo kale, Daa'uudna naago kale Yeruusaalem. Oo isna wuxuu uuraysatay wiilal iyo gabdho.
14:4 Oo kuwanuna waa magacyadii kuwii waxay isaga ugu dhasheen Yeruusaalem: Shammuuca, iyo Shoobaab,, Naataan, iyo Sulaymaan,
14:5 baararka, iyo in Nashua, iyo Elpelet,
14:6 iyo sidoo kale Nogah, iyo Nefeg, iyo Yaafiica,
14:7 Eliishaamaac, iyo Beeliada, iyo Eliifeled.
14:8 Markaasuu, markay maqleen in Daa'uud loo subkay inuu boqor u taliya reer binu Israa'iil oo dhan, Reer Falastiin oo dhan, si kor uguma inay isaga doondoonta oo laga yaabo. Laakiin Daa'uudna markuu taas maqlay, ayuu u baxay inuu iyaga ka hor tago.
14:9 Haddaba reer Falastiin, yimid, Fidiyay in dooxadii Refaa'iim ku.
14:10 Oo sidaas daraaddeed ayaa Daa'uud Rabbiga ku tashaday, oo wuxuu ku yidhi, "Anigu waxaan kori doonaa in reer Falastiin, oo aad ku ridi doonaa gacanta ii soo geliyey?"Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi isagii, "kori, Oo waxaan ku ridi doonaa gacanta idiin geliyey. "
14:11 Oo kolkii ay kor-Bacal Feraasiim, halkaasaa Daa'uud iyagii ku laayay, oo isna wuxuu yidhi: "Ilaah ayaa cadaawayaashayda qaybsan gacantayda, sida biyaha u kala qaybsan yihiin. "Oo sidaas daraaddeed meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey Bacal Feraasiim.
14:12 Oo iyana waxay ku tegey ilaahyadooda meel in, oo sidaas Daa'uud wuxuu iyagii ku amray in la gubo.
14:13 Markaas, mar kale, Reer Falastiin soo galeen, oo waxay soo kala bixiyeen oo ku tiil dooxadii.
14:14 Oo haddana, David Ilaah tashaday. Oo Ilaah wuxuu ku yidhi isagii: "Ma waxaad ka kori doona iyaga ka dib. laakiinse iyaga ka soo bax. Oo waxaad iyaga ugu iman doonaa jeedda geedaha bukaa la.
14:15 Oo markii aad maqashaan codka buunka ah u dhowaanin ee geedaha bukaa dushooda ku, ka dibna aad u soo dagaal u bixi doonaa. Waayo, Ilaah ayaa soo baxay ka hor inta aad, si uu hoos ugu dhufan laga yaabaa in ciidanka reer Falastiin. "
14:16 Sidaa darteed, David kaliya wuxuu yeelay sidii Ilaah isaga baray. Oo isna wuxuu laayay ciidankii reer Falastiin, ilaa Gibecoon iyo tan iyo Gazera.
14:17 Oo iyagoo magaca Daa'uud ku noqday si fiican u yaqaan in gobollada oo dhan. Markaasaa Rabbigu wuxuu kaalinta cabsi isaga ka kor yeelay quruumaha oo dhan.
15:1 Sidoo kale, wuxuu kaloo sameeyey guryo inuu nafsaddiisa ee City of David. Oo meel sanduuqii Ilaah dhisay, oo wuxuu qotomiyey teendho, waayo,.
15:2 Markaasaa Daa'uud yidhi: "Waa sharci darrada ah loogu talogalay qof kasta inay qaadaan sanduuqa Ilaah reer Laawi mooyaane, kuwaasoo Rabbigu ka doortay si ay u iyo inay adeegaan qudhiisu si ay u fuliyaan, iyo xataa tan iyo weligiis. "
15:3 Oo reer binu Israa'iil oo dhan ayuu soo urursaday oo Yeruusaalemna, si sanduuqii Ilaah laga yaabaa in la keeno meeshiisii, oo uu u diyaariyey, waayo.
15:4 Dhab, waxaa jiray mid kasta oo wiilashii Haaruun iyo reer Laawi:
15:5 From reer Qohaad, Uurii'eel oo madax ahaa, iyo walaalihiis oo ahaa boqol iyo labaatan.
15:6 From reer Meraarii: Casaayaah oo ahaa madaxdii, iyo walaalihiis oo ahaa laba boqol iyo labaatan.
15:7 From reer Gershoomna: Joel wuxuu ahaa madaxdii, iyo walaalihiis oo ahaa boqol iyo soddon.
15:8 From reer Eliisaafaanna: Shemacyaah oo ahaa madaxdii, iyo walaalihiis oo ahaa laba boqol iyo.
15:9 From Wiilashii Xebroonna: Iyo Elii'eel oo ahaa madaxdii, iyo walaalihiis waxay u siddeetan.
15:10 From oo ahaa wiilashii Cusii'eel: Cammiinaadaabna wuxuu ahaa madaxdii, iyo walaalihiis oo ahaa boqol iyo laba iyo toban.
15:11 Markaasaa Daa'uud u yeedhay wadaaddadii, Saadooq iyo Aabyaataarna, iyo kuwii reer Laawi: Uurii'eel, Casaayaah, Joel, Shemacyaah, iyo Elii'eel, iyo Cammiinaadaab.
15:12 Oo isna wuxuu ku yidhi iyagii: "Waxaad kuwa madaxda ah qolooyinka reer Laawi, quduus ku noqon walaalahaa, oo sanduuqii Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil ugu soo qaaddaan meeshii oo uu soo diyaariyey, waayo,.
15:13 Haddii kale, sidii ay hore u ahayd, markii Rabbigu inoogu laayay, maxaa yeelay, aad uma soo bandhigaan, sidaas oo kale waxaa laga yaabaa in hadda, haddii aannu ku samayn lahayn waa wixii sharci darrada ah. "
15:14 Sidaa darteed, wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi isdaahiriyeen, si ay qaadaan sanduuqa Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil.
15:15 Oo reer Laawi oo qaaday sanduuqii Ilaah, sidii Muuse ku amray, waafaqsan ereyga Rabbiga ah, garbaha by ulihiina wuxuu ku dul.
15:16 Markaasaa Daa'uud wuxuu la hadlay madaxda reer Laawi, si ay u magacaabi laga yaabaa in, ka hadhaan walaalahooda ay, Oo nimankii gabayaaga ahaa oo la alaabtii muusikada, si gaar ah, shareerado, iyo kataarado,, iyo suxuun laysku garaaco, si ay farxad ugu qaylinno innagoo maqlaa laga yaabaa in sare.
15:17 Oo waxay ka reer Laawi waxay doorteen: Heemaan, oo ahaa ina Yoo'eel; iyo walaalihiis oo ka soo, Aasaaf, ina Berekyaah; oo daacad ah, ka hadhaan walaalahooda ay, reer Meraarii: Eetaan, ina Quushaayaah.
15:18 Oo waxaa iyaga la jiray oo walaalahood ah ee darajo labaad: Sekaryaah, iyo Ben, iyo Yacasii'eel, iyo Shemiiraamood, iyo Jahiel, iyo Cunnii, iyo Elii'aab, iyo Benaayaah, iyo Macaseeyaah, iyo Matityaah, iyo Eliifeleehuu, iyo Miqneeyaah, iyo Cobeed Edoom, iyo Yecii'eel oo haysan jiray, oo waxay ahaayeen irid-dhawryadii.
15:19 Haddaba nimankii gabayaaga ahaa, Heemaan, Aasaaf, iyo Eetaan, ayaa lagu dhawaaqayo siteen suxuun naxaas ah.
15:20 Oo Sekaryaah, iyo Casii'eel, iyo Shemiiraamood, iyo Yexii'eel, iyo Cunnii, iyo Elii'aab, iyo Macaseeyaah, iyo Benaayaah ayaa gabay ku qarsoon shareerado ah.
15:21 Markaas Matityaah, iyo Eliifeleehuu, iyo Miqneeyaah, iyo Cobeed Edoom, iyo Yecii'eel, iyo Casasyaah ayaa gabay ku gabay guusha kataarado ah, waayo, wax Shemiiniid.
15:22 Haddaba Kenanyaah, oo amiir u ahaa reer Laawi, ahaa horeyn ka badan waxsii sheegyada, si ay u xusaan soo baxay ka hor melodies ah. Waayo,, uu ahaa mid aad u caqli badan.
15:23 Oo Berekyaah iyo Elqaanaahna waxay iridjoogayaal u ahaayeen sanduuqii.
15:24 Markaasaa wadaaddadii waxay u, Shebanyaah, iyo Yehooshaafaad, iyo Netaneel, iyo Camaasay, iyo Sekaryaah, iyo Benaayaah, iyo Eliiceser, ayaa dhawaaqaysa afuufayeen sanduuqii Ilaah hortiisa. Isaga iyo Cobeed Edoom iyo Yexiyaahna iridjoogayaal sanduuqa.
15:25 Sidaa darteed, David, iyo dhamaan kuwa ka weyn u dhashay oo reer binu Israa'iil, iyo tribunes ah, u tageen inay qaadaan sanduuqa axdiga Rabbiga ka soo qaadaan gurigii Cobeed Edoom iyagoo faraxsan.
15:26 Oo markii Ilaah caawiyey kuwii reer Laawi ayaa, kuwaas oo siday sanduuqii axdiga Rabbiga, waxay allabari baan toddoba dibi iyo toddoba wan.
15:27 Oo Daa'uudna wuxuu xidhnaa dhar laga sameeyey maro wanaagsan dhar, sida ku jiray oo dhan kuwii reer Laawi oo sanduuqa qaaday oo, iyo nimankii gabayaaga ahaa, iyo Kenanyaah, hogaamiyaha wax sii sheegidda oo ka mid ahaa kuwii gabayaaga ahaa. Laakiinse Daa'uud waxaa sidoo kale eefod dhar wanaagsan laga sameeyey.
15:28 Oo reer binu Israa'iil oo dhan ayaa dib u keentay sanduuqii axdiga Rabbiga la Farxad, dhawaaqaysa baxay qaylada geesihii, iyo turumbooyin, iyo suxuun laysku garaaco, iyo shareerado,, iyo kataarado,.
15:29 Oo markii sanduuqii axdiga Rabbigu ku yimid magaaladii Daa'uud, Michal, gabadhii Saa'uul, eegaysaan daaqaddii, waxay aragtay Boqor Daa'uud oo cayaaraya ciyaaro, oo isagii way qalbiga ka quudhsatay.
16:1 Oo sidaas daraaddeed waxay qaateen sanduuqii Ilaah, oo ay dhex dhigeen taambuugga ah, oo Daa'uud u dhisay, waayo,. Oo waxay Ilaah hortiisa ku bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaadiino.
16:2 Oo Daa'uudna markuu dhammeeyey qurbaankii la gubo iyo qurbaanno nabaadiino, ayuu dadkii ugu duceeyey magicii Rabbiga.
16:3 Kolkaasuu kala qaybiyey mid kasta hal, dadka xitaa dumarka, maroojin yar oo kibis ah, iyo goosin ka mid ah hilibka lo'da la dubay, iyo bur wanaagsan oo sarreen ah la shiilay oo saliid.
16:4 Oo isna wuxuu ku magacaabay qaar ka mid ah ka reer Laawi, kuwaas oo doonayay inay ka adeegaan sanduuqa hortiisa Rabbiga, iyo shuqulladiisii ​​uu ku xusto, iyo u ammaanaan oo ammaanaan Rabbiga, Ilaaha reer binu Israa'iil.
16:5 Aasaaf ahaa madaxdii, oo ahaa kii labaad, wuxuu ahaa Sekaryaah. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray Yecii'eel, iyo Shemiiraamood, iyo Yexii'eel, iyo Matityaah, iyo Elii'aab, iyo Benaayaah, iyo Cobeed Edoom. Iyo Yecii'eel oo ahaa alaabta iyo shareeradda, iyo kataarado, ka. Laakiin Aasaaf ka dhawaajisay baxay suxuun ah.
16:6 Runtii,, wadaaddada ah, Benaayaah iyo Yaxasii'eel, waxay ahaayeen kuwo buun had iyo sanduuqii axdiga Rabbiga hortiisa.
16:7 Oo maalintaas, Daa'uud uu ka dhigay Aasaaf hogaamiyaha, si ay u qiranayaa Rabbiga u walaalihiis:
16:8 "Qirto oo Rabbiga u, oo magiciisiina wuxuu Caabudayaan. Samee dayada yaqaan dadyowga ka dhex sheega.
16:9 Isaga u gabya, oo isaga ammaan ugu heesa si, oo sharaxaad ka mucjisooyinka oo dhan.
16:10 ammaana magiciisa quduuska ah! Qalbigoodu ha kuwa Rabbiga doondoonaa farxi!
16:11 Raadi Rabbiga iyo wanaaggiisa. wejigiisii ​​oo had iyo jeer raadso.
16:12 Xusuusnow calaamooyinkii uu, taas oo uu ku dhammaado, Calaamooyinka, Iyo cajaa'ibyadiisii ​​iyo xukummadii afkiisa.
16:13 farcankaaga O reer binu Israa'iil, addoommadiisii! O wiilashii Yacquub, kuwuu doortay!
16:14 Isagu waa Rabbiga Ilaaheenna ah. Xukummadiisiina waxay yihiin dhulka oo dhan.
16:15 weligiis xusuusta axdigiisa, erayga uu baray ilaa kun qarni,
16:16 axdi wuu la aasaasay Ibraahim, oo dhaar la Isxaaq.
16:17 Oo isla kaas wuxuu u doortay inay Yacquub amarba amar a, iyo inay reer binu Israa'iil sidii heshiis weligiis ah,
16:18 oo wuxuu ku yidhi: 'Aad Si aad, dalka reer Kancaan waxaan siin doonaa, qaybtii dhaxalkiinna aad. '
16:19 Wakhtigaas, ay ahaayeen kuwo yar yar ee tirada, waxay ahaayeen dhawr iyo waxaa jiray degayaasha.
16:20 Oo waxay dhex mareen, quruunba quruun, oo ka mid ah boqortooyada dadka kale.
16:21 Ma uusan oggolaan cid si been ah iyaga ashtakeeyaan. Halkii, ayuu boqorro u canaantay iyaga oo wakiil:
16:22 'Ha taaban aan Masiixa. Hana dhiba nebiyadaydana. '
16:23 Rabbiga u gabya,, dhulka oo dhan! Ugu bishaaree Oo badbaadintiisana, maalin ka maalin.
16:24 Aan Yuhuudda ahayn dhexdooda Sharaxaad ammaantiisa, mucjisooyinka dadyowga oo dhan ka dhex sheega.
16:25 Waayo, Rabbigu waa weyn yahay oo aad iyo aad u amaan. Oo wuu u cabsi badan, sarreeyaa ilaahyada oo dhan.
16:26 Maxaa yeelay, dhammaan dadyowga ilaahyadooda waa sanamyo. Laakiinse Rabbigu isagaa sameeyey samooyinka.
16:27 Qirasho iyo weynaanteedana hortiisay yaalliin. Xoog iyo farxaduna meeshiisay ku jiraan.
16:28 Soo qaado Rabbiga, qoysaska O dadyowga, keeni doontaa ammaanta Rabbiga iyo dowladnimo.
16:29 Ammaan Rabbiga, inuu magiciisa. Kor u qaad oo allabari, iyo hab hortiisa ka hor. Markaasaa Rabbigu wuxuu ku lebbisan quduuska Khayrja.
16:30 dhulka oo dhan ha la dhaqaajin wejigiisa hor. Waayo, isagu wuxuu aasaasay caalamka immoveable.
16:31 Haddaba samooyinku ha farxeen, oo ha farxeen dhulka. Oo iyagu ha quruumaha dhexdooda ha laga yidhaahdo, 'Rabbigu wuxuu boqor ku ahaa.'
16:32 Ha badda guuxeen, oo dhan ay plenitude. Ha beeraha Farxa, in waxa dhexdooda ku jira oo dhan.
16:33 Oo markaasay dhirta kaynta ammaani doonaa Rabbiga hortiisa. Waayo, isagu wuxuu u imanayaa inuu dhulka xukumo.
16:34 Qirto oo Rabbiga u, waayo, isagu waa wanaagsan yahay. Waayo, naxariistiisu weligeedba.
16:35 oo waxaad ku tidhaahdaan: 'Na badbaadi, Ilaahow naga badbaadiye! Oo na soo wada ururi, iyo quruumaha naga soo badbaadiyaan, laga yaabaa in aan si ku qiran in magacaaga quduuska ah, iyo farxi laga yaabaa in aad songs.
16:36 Waxaa mahad leh Sayidka, Ilaaha reer binu Israa'iil, Tan iyo weligiis weligiisba. 'Oo dadka oo dhammu ha odhan, Aamiin,'Oo iyagu ha u gabyi ku gabyeen Rabbiga u. "
16:37 Oo sidaas daraaddeed, halkaas sanduuqii axdiga Rabbiga hortiisa, ayuu kaga tegey Aasaaf iyo walaalihiis, si ay u adeego hortiisa sanduuqa had iyo, maalinta oo dhan, iyo in markooda ay.
16:38 Haddaba Cobeed Edoom iyo walaalihiis waxay ahaayeen lixdan sideed-. Oo isna wuxuu ku magacaabay Cobeed Edoom, oo ahaa ina Yeduutuun, iyo Xosaahna wuxuu uga tegey inay ahaadaan iridjoogayaal.
16:39 Laakiin wadaadkii Saadooq, iyo walaalihiis oo ahaa wadaaddadii, ahaayeen taambuugga Rabbiga oo ku yiil meeshii sare oo hor, kaas oo ahaa in Gibecoon,
16:40 si ay u soo bandhigi kartaa gubo Rabbiga ku saydhsaydhaa meesha allabariga ee la gubo oo had iyo, subaxda iyo fiidka,, sidii wixii oo dhan waxaa ku qoran sharciga Rabbiga, taas oo uu ku amray in reer binu Israa'iil.
16:41 Oo isaga dabadiisna, Heemaan, iyo Yeduutuun, iyo inta ka dhiman la doortay, mid kasta magiciisa by, waxaa loo doortay inay u qiranayaa Rabbiga u: "Waayo, naxariistiisu weligeedba way sii waartaa."
16:42 Sidoo kale Heemaan iyo Yeduutuun oo buunka yeedhin jirayna aniguu, oo waxay ku dul ciyaaray suxuun ah, iyo cayn kasta oo qalab muusig, si ay ammaan ugu gabya, Ilaah. Laakiin reer Yeduutuunna wuxuu ka dhigay inay iridjoogayaal noqon.
16:43 Markaasaa dadkii oo dhammu ku soo laabtay guryahooda, iyo David ayaa sidoo kale, si uu gurigiisa ugu taliyo aad ku barakeeyo.
17:1 Haddaba markii Daa'uud ku nool gurigiisa, wuxuu Nebi Naataan ku yidhi: "Bal eeg, Waxaan ku nool guri qori kedar ah. Laakiinse sanduuqii axdiga Rabbiga ka yar yahay hargahood oo teendhadiisii. "
17:2 Markaasaa Naataan wuxuu Daa'uud ku yidhi: "Ma waxa aad qalbigiinna oo dhan. Waayo, Ilaah baa kula jira. "
17:3 Oo weliba, habeenkaas Naataan u yimid eraygii Ilaah, oo wuxuu ku yidhi:
17:4 "Tag, iyo hadal addoonkaygii Daa'uud: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay: Waa inaadan guri u dhisin ii meel deggan.
17:5 Waayo, ma aan joogay guri laga bilaabo wakhtiga marka aan wadeen Israa'iil, ilaa maantadan la joogo. Halkii, Waxaan la had iyo beddelo meelo, taambuug iyo teendhadii,
17:6 la binu Israa'iil oo dhan deggan. Goorma aan abid la hadal mid ka mid ah oo dhan, ka mid ah xaakinnadii reer binu Israa'iil kii aan kaalinta mas'uul ka si ay u dadkayga Daajiya laga yaabaa in, oo wuxuu ku yidhi: War maxaad guri qori kedar ah oo aan dhisay ii?'
17:7 Oo sidaas daraaddeed, hadda waxaad si addoonkayga Daa'uud ku odhan doonaa: Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay,: Waxaan ku soo watay inaad markii la socda adhiga in daaqa, si aad u noqon lahaa hoggaamiyaha dadkayga reer binu Israa'iil.
17:8 Oo waxaan idinla joogay meel kastoo aad tagtayba. Oo waxaan ku laayay cadaawayaashiinna oo dhan aad ka hor, oo waxaan ka dhigay magac kuu u eg mid ka mid ah kuwa waaweyn kuwaas oo u dabaal dhulka ku kor yaal.
17:9 Oo waxaan ku siiyey meel dadkayga reer binu Israa'iil. Waxay la beeray waa, oo iyana way ku noolaan doonaa, oo mar dambe lama dhaqaajin doono. Midkoodna wiilashii xumaanta iyagii u dhibi doonaa, sida bilowgii,
17:10 ka maalmood markii aan xaakinno ku siiyey dadkayga reer binu Israa'iil, oo waxaan is-hoosaysiiyey cadaawayaashiinna oo dhan. Sidaa darteed, Ayaan wax idiinka sheegayaa in Rabbiga guri u dhiso kuu.
17:11 Oo markii aad dhammaysay doonaa maalmaha aad, si aad u tagto awowayaashiin, waan soo sara kicin doonaa farcankaaga aad ka dib, kuwaas oo wiilashiinna ka noqon doonaan. Oo anigu boqortooyadiisaan xoogayn doonaa.
17:12 Oo isna guri buu ii dhisi doonaa, oo waxaan ka dhigi doonaa wuxuu carshigiisii ​​ka adag, iyo xataa tan iyo daa'in.
17:13 Aniguna waxaan ahaan doonaa aabbihiis isaga ku, oo wuxuu ahaan doonaa wiilkaygii ii. Oo waxaan naxariistayda kama fogayn doono isagii ka tagtay, sidii aan u qaatay mid ka mid ah kuwaas oo ahaa aad ka hor.
17:14 Oo waxaan doono saldhigga isaga anoo gurigayga iyo boqortooyadayda,, xataa weligood. Oo carshigiisuna wuxuu noqon doonaa mid aad u adag, weligeed ah. "
17:15 Haddaba siday erayadaas oo dhan, iyo sida ay aragtidan oo dhan, sidaa darteed ma Naataan kula hadlay Daa'uud.
17:16 Oo Boqor Daa'uudna markuu ka tageen, oo ay u fadhiisteen Rabbiga hortiisa, ayuu yiri: "Yaan ahay, Rabbiyow, Ilaaha, iyo waxa gurigayga, in aad siin lahayd waxyaalahan oo kale ii?
17:17 Laakiin xitaa waxa uu u muuqday in yar iyo adiga hortaadaba, oo sidaas daraaddeed waxaad kaloo ka sii hadashay guriga anoo addoonkaaga ah oo ku saabsan xataa mustaqbalka. Oo waad i lanooga dhigay kor ku xusan dadka oo dhan, Rabbiyow, Ilaaha.
17:18 Waa maxay more David dari kartaa, tan aad leedahay si ammaanay, anoo addoonkaaga ah, iyo garanayaa isaga?
17:19 Rabbiyow, maxaa yeelay, anoo addoonkaaga ah, in wada qalbi ah oo aad qalbigiinna oo u gaar ah, aad u keeneen oo ku saabsan weynaanteedana oo dhan this, oo aad doonana waxyaalahan waaweyn oo dhan la yaqaan.
17:20 Rabbiyow, Waxaa jira mid kula mid ahu kuma. Oo waxaa Ilaah kale ma jiro marka laga reebo aad ka, oo dhan kan aynu ku maqlay oo ku saabsan dhegahayaga.
17:21 Waayo, bal waa tee quruunta hal kale dhulka waa sida dadkaaga reer binu Israa'iil, kan Ilaah fidiyey, oo sidaas daraaddeed ayuu iyaga oo lacag la'aan ah oo laga yaabo, iyo dad isaga nafsaddiisa u dhigo, oo uu waxyaalo waaweyn oo cabsi soo baxay quruumaha wejiga kuwa kii uu kuwii laga xoreeyey Masar ka hor tuuray?
17:22 Oo aad u qotomiyey dadkaaga reer binu Israa'iil si ay dadkaagu u badan yahay, iyo xataa tan iyo daa'in. Oo waa inaad, Rabbiyow, u noqday Ilaah.
17:23 Haddaba sidaas daraaddeed, Rabbiyow, eraygii aad ku hadashay anigoo addoonkaaga ah ha, iyo reerkiisa ka badan, la xaqiijiyay weligeed ah, oo kaliya ku samaysaa wixii aad ku hadashay.
17:24 Oo magacaaga hadhaan oo la weyneeyo, waayo, mar kasta. Oo ha la sheegay: 'Rabbiga ciidammadu waa Ilaaha reer binu Israa'iil. Oo gurigii Daa'uud oo addoonkaagii ahaa weligiisba wuu waaraa isaga ka hor. '
17:25 Waayo, waxaad, Rabbiyow, Ilaahayow, ayaa shaaca ka qaaday in ay dhegta anoo addoonkaaga ah in aad guri isaga u dhisi doonaa. Oo sidaas daraaddeed anoo addoonkaaga ah iimaanka helay si uu baryayaaye laga yaabaa in aad ka hor.
17:26 Haddaba, Rabbiyow, waxaad tahay Ilaah. Iyo markaad ila hadashay anigoo addoonkaaga ah faaiidooyin waaweyn sida aad.
17:27 Oo waxaad bilowday inaad guriga anoo addoonkaaga ah ha ku barakeeyo, sidaa darteed waxaa laga yaabaa in had iyo jeer aad ka hor. Waayo, tan iyo markii ay aad u dheer tahay, kuwaas oo ah barakada, Rabbiyow, waxa barakoobi doonaan weligood. "
18:1 Haddaba waxyaalahaas ka dib, waxaa dhacay in Daa'uud reer Falastiin laayay, oo wuxuu iyagii ku hoosaysiiyey, oo wuxuu soo waday Gad ta iyada iyo gabdhaheeduba gacantii reer Falastiin.
18:2 Oo isna wuxuu ku dhuftay Moo'aab. Oo reer Moo'aabna waxay addoommadii Daa'uud noqday, bixiya hadiyadaha isaga u.
18:3 Oo wakhtigaas waxaa, David ayaa sidoo kale ahaa Hadarceser, oo wuxuu boqorkii Soobaah, ee gobolka Xamaad, markii uu soo baxay si uu u kordhiyo inuu dowladnimadiisa iyo tan iyo Webi Yufraad.
18:4 Markaasaa Daa'uud wuxuu qabsaday kun iyo gaadhifardoodkiisa afar-faras, iyo toddoba kun oo fardooley ah, iyo labaatan kun oo nin oo lug ah. Oo isna wuxuu boqno jaray fardihii gaadhiyada waday oo dhan, marka laga reebo mid ka mid ah afar boqol oo gaadhifaras-faras, taas oo uu ku hayaa inuu nafsaddiisa.
18:5 Markaasaa reer Suuriyihii Dimishaqna sidoo kale soo gaaray, si ay u bixiyaan gargaar inay u hiiliyaan, oo wuxuu boqorkii Soobaah. Oo sidaas daraaddeed, Oo markaas Daa'uud wuxuu ku dhuftay oo ka mid ah-laba iyo labaatan kun oo nin.
18:6 Oo isna wuxuu saldhig ciidamada Dimishaq, si Suuriya sidoo kale isagay u adeegi lahaa, oo waxaad bixisaa lahaa hadiyado. Oo Rabbigu wuxuu isagii ku caawisay in waxyaalihii oo uu ku soo baxay oo dhan.
18:7 Sidoo kale, Markaasaa Daa'uud soo qaaday uu gilgisho oo dahab ah, oo addoommadii Hadadceser lahaa, oo wuxuu iyagii keenay Yeruusaalem.
18:8 Intaa waxaa dheer, Tibxad iyo Kuun, Oo magaalooyinkii Hadadceser oo, wuxuu keenay naxaas aad u badan, kaas oo Sulaymaan ka sameeyey berkeddii naxaasta, iyo tiirarka, iyo weelashii naxaasta ahaa.
18:9 Haddaba markii Tocii, ee ahaa boqorkii Xamaad, waxaas maqlay, gaar ahaan in Daa'uud ku dhuftay ciidanka oo dhan oo ahaa Hadadceser, oo wuxuu boqorkii Soobaah,
18:10 wuxuu wiilkiisii ​​Hadooraam u soo Boqor Daa'uud u cid diray si uu codsi nabadgalyo ka, iyo si uu ugu hambalyeeyo laga yaabaa in uu ku dhuftay oo ahaa Hadarceser. Waayo,, Oo Tocii oo cadow ku ah inay u hiiliyaan ahaa.
18:11 Waxaa intaa dheer, kulli weelashii ahaa dahabka iyo lacagta oo naxaas Boqor Daa'uud wuxuu quduus xagga Rabbiga, iyadoo lacagtii iyo dahabkii uu ka soo qaaday ka soo dhacay quruumihii oo dhan, sida badan ka Edom, iyo reer Moo'aab, iyo reer Cammoon, sida ka reer Falastiin iyo reer Camaaleq;.
18:12 Runtii,, Abiishay, oo ay Seruuyaah dhashay, dhuftay siddeed iyo toban kun oo reer Edom Dooxadii Cusbada Godadka.
18:13 Oo isna wuxuu saldhig ciidanku ah ee Edom, si Edom adeegi lahaa David. Markaasaa Rabbigu wuxuu Daa'uud ku badbaadi alaabtii oo uu ku soo baxay oo dhan.
18:14 Sidaa darteed, David taliyey binu Israa'iil oo dhan, oo wuxuu qaybshay xukun iyo caddaalad dadka oo dhan ka mid ah.
18:15 Haddaba Yoo'aab, oo ay Seruuyaah dhashay, ahaa ciidanka u sarreeyey, iyo Yehooshaafaad oo ahaa, oo ahaa ina Axiiluudna, ahaa kii dhawri jiray diiwaanka.
18:16 iyo Saadooq, ina Axiituub, iyo Axiimeleg, ina Aabyaataar, waxay ahaayeen wadaaddadii. Shawshaana wuxuu ahaa karraani.
18:17 Sidoo kale, Benaayaah, ina Yehooyaadaac, waxaa u sarreeyey guuto Kereetiim iyo reer Feleetii. Laakiinse reer Daa'uud markii ugu horraysay ku jiray ee gacanta boqorka.
19:1 Haddaba waxaa dhacday in Naaxaash, iyo boqorkii reer Cammoon, dhintay, oo wiilkiisii ​​meeshiisii ​​boqor ka noqday.
19:2 Oo Daa'uudna wuxuu yidhi: "Waxaan la Naxariis xaggiisa Xaanuun ku dhaqaaqi doonto, oo ahaa ina Naaxaash. Waayo, aabbihiisna wuxuu ahaa ii naxariiste. "Oo sidaas daraaddeed Daa'uud wargeeyayaal inay u tacsiyeeyaan dhimashada aabbihiis diray. Laakiin marka ay dalka reer reer Cammoon soo gaaray, si ay u tacsiyeeyaan laga yaabaa Xaanuun,
19:3 madaxda ahaa reer Cammoon waxay ku yidhaahdeen Xaanuun: "Ma waxaad u malaynaysaa in laga yaabo in David ayaa iyagii u diray inay aad tacsiyeeyaan si aad aabbahaa cisaynayo? War sow ma aad dareentay in addoommadiisii ​​ayaa u yimid si ay u sahamiyaan laga yaabaa in, iyo baaraan, iyo dalkii baaro?"
19:4 Oo sidaas daraaddeed Xaanuun xiiray madaxdii iyo garka ah addoommadii Daa'uud, oo isna wuu khamiis ay ka badhida cagaha gooyaa, iyo ayuu iska diray.
19:5 Oo markay tageen, oo uu eraygii wuxuu Daa'uud u diray, (waayo, intay soo gaaray ceeb weyn,) uu u soo diray inuu iyaga ka hor tago, oo wuxuu iyaga ku baray in ay sii Yerixoo iska jooga ilaa gadhku idiin ay koray, ka dibna waa ay soo noqon.
19:6 Markaasuu, markii reer Cammoon ay ogaadeen in ay ka go'an dhaawac Daa'uud, labada Xaanuun iyo dadka intiisa kale soo diray mid ka mid kun oo talanti oo lacag ah, si ay u kiraystaan ​​laga yaabaa in ay naftooda gaadhifardood iyo rag fardooley ka Mesobotamiya, oo ka Macakaah Suuriya, iyo Soobaah.
19:7 Oo waxay soo kiraysteen laba iyo soddon kun oo gaadhifaras, iyo boqorkii Macakaah oo isna wata dadkiisa. Marka ay soo gaareen, oo waxay ka sameeyeen xero ee gobolka ka soo horjeeda Meedebaa. Sidoo kale, reer Cammoon, ururinta magaalooyinkoodii, dagaalka u baxay.
19:8 Oo Daa'uudna markuu taas maqlay, ayuu diray Yoo'aab iyo ciidankii oo dhan nin oo xoog leh.
19:9 Oo reer Cammoon, bixiddaada, iridda magaalada laga soo hor dhigay ilaa line dagaal. Laakiin boqorradii yimidna ay gargaarka si gooni gooni ah istaagay oo duurka ku.
19:10 Oo sidaas daraaddeed Yoo'aab, fahamka dagaalka lagu dhejiyo isaga iyo gadaashiisa jeeda, doortay ragga xoogga badan oo dhan reer binu Israa'iil, oo intuu u soo baxay reer Suuriya.
19:11 Laakiin qayb ka hartay dadka uu hoos baxeen gacantii dadka walaalkiis Abiishay kaalinta. Oo iyana waxay ku soo baxeen reer Cammoon.
19:12 Oo isna wuxuu yidhi: "Haddii reer Suuriya iga adkaada ka badan, markaas waxaad ahaan doontaan i caawin. Laakiin haddii reer Cammoon kaa adkaan badan, Waxaan noqon doonaa illaalin kuu.
19:13 in la xoojiyo, oo aynu Ljunberg u dhaqmaan oo ku hadlaya magaca dadka our, oo ka wakiil ah magaalooyinka Ilaaheen. Oo Rabbiguna ha sameeyo wixii la wanaagsan in uu agtiisa u gaar ah. "
19:14 Sidaa darteed, Yoo'aab, iyo dadkii isaga la jiray, u soo baxeen inay la diriraan reer Suuriya. Oo wuxuu iyagii ku riday diyaarad.
19:15 Markaasaa reer Cammoon, markay arkeen in reer Suuriya carareen, sidoo kale isu Abiishay ka cararay, walaalkiis, oo waxay galeen magaaladii. Haddaba Yoo'aab Yeruusaalem ku noqdeen.
19:16 Laakiin Suuriya, markay arkeen in ay Israa'iil ka hor dhacay, wargeeyayaal u diray, oo waxay u keeneen reer Suuriyihii webiga. Oo Shoofag, oo amiir u ahaa ciidanka Hadarceser, waxay ahayd taliyaha.
19:17 Marka ay tani ayaa la soo sheegay Daa'uud u, wuxuu soo wada ururiyey reer binu Israa'iil, oo wuxuu soo gudbay Webi Urdun. Oo isna wuxuu ku yaaceen iyaga xagga. Markaasuu qotomiyey line a dagaalka iyaga jeeda. Wayna la dirireen isaga ka gees ah.
19:18 Laakiin reer Suuriya Israa'iil ka carareen. Oo Daa'uudna wuxuu reer Suuriya ka laayay toddoba kun oo gaadhifaras, iyo afartan kun oo nin oo lug ah, iyo Shoofag, Hogaamiyaha ciidanka.
19:19 Markaasaa Hadarceser addoommada, isu arkaya in la dabooshay by Israa'iil, gudbay Daa'uud u, oo waxay isaga u adeegi jiray. Oo Suuriya ahaa ma sii diyaar u ah inay bixiyaan gargaarka reer Cammoon in.
20:1 Wakhtigaas waxaa dhacay in, ka dib markii koorsada of sano ah, wakhtiga boqorradaas oo sida caadiga ah oo dagaalka u bixi, Yoo'aab ciidan soo ururay oo askar khibrad, oo uu qashinka dalka reer reer Cammoon la dhigay. Oo isna wuxuu ku sii ayuu Rabbaah hareereeyey. Laakiinse Daa'uud waxaa jooga Yeruusaalem Yoo'aab markuu ku dhuftay Rabbaah oo u baabbi'iyey.
20:2 Markaasaa Daa'uud soo qaaday taajkii of Milkom oo madaxiisa, oo wuxuu helay in miisaankiisu yahay talanti dahab ah, iyo dhagaxyo qaali ah. Oo isna intuu u yeelay cigaal ka. Sidoo kale, wuxuu qaaday alaabtii boolida ahayd ugu fiican ee magaalada, oo aad bay u badnaayeen.
20:3 Markaasuu wuxuu iska hor kacday dadkii ku jiray oo. Oo wuxuu ka dhigay xaaqidda, iyo golfida, iyo gaadhifardood bir ah si ay u tagaan iyaga u taliya, aad u badan si ay u gooni ah ayaa la gooyaa oo la jajabiyey. Sidaas ma David daweeyo dhammaan magaalooyinkii reer Cammoon. Oo isna wuxuu la dadkiisii ​​oo dhan Yeruusaalem ku noqdeen.
20:4 Oo waxyaalahaas dabadood, dagaal ayaa waxaa bilowday haddana Geser lagula Falastiin ka gees ah, taas oo Sibbekay oo ka tartanka Refaa'iim ku dhuftay Sifay, oo wuxuu iyagii ku hoosaysiiyey.
20:5 Sidoo kale, dagaal kale ayaa la sameeyaa Falastiin ka gees ah, taas oo Elxaanaan, wiil kaynta, Beytlaxam a, ku dhuftay oo ahaa Yacquub walaalkiis Goli'ad kii reer Gad, qoryihii warankiisuna waxay le'ekayd dharsameeyaha looxiisa ee.
20:6 Markaasuu aad u, dagaal kale oo ka dhacay Gad, taas oo ay jirto ahaa nin aad u dheer, isagoo lix lambar, in uu yahay, oo dhan si wadajir ah afar iyo labaatan. Ninkan sidoo kale waxa uu ku dhashay ka ahay jinsiga reer Refaa'iim.
20:7 Wuxuu caayay Israa'iil. Markaasaa Yoonaataan, ina Shimcaa, kii walaal u yahay David, isaga laayay. Kuwaasu waxay ahaayeen wiilashii Rafaa Gad, kuwaas oo uu gacanta David iyo addoommadiisii ​​dhacay.
21:1 Haddaba Shayddaan baa ku kacay reer binu Israa'iil, oo Daa'uud buu dirtay si uu tirin lahaa Israa'iil.
21:2 Markaasaa Daa'uud wuxuu ku yidhi Yoo'aab iyo madaxda dadka: "Tag, iyo tirada Israa'iil, tan iyo Bi'ir Shebac iyo ilaa Daan. Oo waxaa ii keeno tirada, si aan u ogaado. "
21:3 Markaasaa Yoo'aab ka jawaabtay: "Rabbigu wuxuu dadkiisa dhigo boqol jeer in ka badan ay yihiin. Laakiin, boqorow, sayidkaygiiyow, Kuwaasi ma ah addoommadaada oo dhammuba? Maxaad sayidkaygiiyow, waxan doondoonin, oo waxaa lagu xisaabi karaa dembi ah in reer binu Israa'iil?"
21:4 Laakiin adkaaday eraygii boqorka halkii. Markaasaa Yoo'aab ka tegey, oo intuu ku soo safray, iyada oo loo marayo oo dhan reer binu Israa'iil. Oo Yeruusaalem buu ku noqday.
21:5 Kolkaasuu Daa'uud ku siiyey tirada dadka oo uu ka waraystay. Oo tiradoodii oo dhan reer binu Israa'iil waxaa lagu ogaaday in hal milyan iyo boqol kun oo nin oo seef ku sawiri kartaa; laakiinse dadka Yahuudah ka, waxaa joogay afar boqol iyo toddobaatan kun oo nin oo dagaal.
21:6 Laakiin Laawi iyo reer Benyaamiin oo isagu ma uu tirada. Waayo, Yoo'aab toogasho ku amray boqorka la ikraahi.
21:7 Markaas ayaa Ilaah ugu cadhooday wixii lagu amray, oo sidaas daraaddeed ayuu laayay reer binu Israa'iil.
21:8 Markaasaa Daa'uud wuxuu Ilaah ku: "Waan ku dembaabay aad iyo aad in this samaynaya. Waxaan kaa baryayaa inaad qaadato iga fogee dembigayga anoo addoonkaaga ah. Waayo, unwisely waxaan u dhaqmeen. "
21:9 Markaasaa Rabbigu la hadlay Gaad, oo wax arke ahaa oo Daa'uud, oo wuxuu ku yidhi:
21:10 "Tag, oo kula hadlay Daa'uud, oo waxaad ku tidhaahdaa: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay: Waxaan idin siinayaa ikhtiyaarka ah saddex waxyaalood. Dooro mid ka mid ah in aad rabto in aad doonaa, oo waan ku jiraa idinku samayn doonaa. "
21:11 Oo markuu Gaad baxeen inay Daa'uud wax, wuxuu ku yidhi isagii: "Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay: Dooro waxa aad u baahan doontaa:
21:12 Saddex sannadood oo abaar ah, ama saddex bilood oo aad loogu talagalay si aad cadaawayaashiinna ka carari, awoodin in ay seefta ka baxsadaan, ama saddex maalmood, waayo, seeftii Rabbiga iyo belaayo inuu ka soo leexdo dalka gudahood, la malaa'igtii Rabbiga ku dhinteen in ka qayb kasta oo ka mid ah reer binu Israa'iil. Haddaba sidaas daraaddeed, bal arag waxa ay tahay in aan ka jawaabo kii i soo diray. "
21:13 Markaasaa Daa'uud wuxuu Gaad: "Waxaa jira dhibaatooyin riixaya i dul dhinac kasta. Laakiin waxaa wanaagsan ii leh in lagu dhaco gacmaha Rabbiga galay, waayo, naxariistiisu waa badan, badan Gacmaha dadka galay. "
21:14 Sidaa darteed, Rabbiga belaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu Israa'iil. Oo waxaa ka soo Israa'iil toddobaatan kun oo nin.
21:15 Sidoo kale, uu Angel ah u soo diray Yeruusaalem, si uu u habsan karta. Oo intuu Garaaci, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu arkay oo wuxuu qabsaday nixi badan baaxadda waxyeellada. Oo wuxuu ku amray Angel kii Garaaci: "Waa ku filan tahay. Haddaba ha joojin gacanta. "Markaasay malaa'igtii Rabbigu wuxuu ag lagu tumi jiray ee Aarnaankii reer Yebuus leeyahay taagan.
21:16 Oo Daa'uudna, indhihiisii ​​kor u qaaday, wuxuu arkay malaa'igtii Rabbiga, samada iyo dhulka u dhaxaysa jeeda oo seeftiisii ​​oo gal la 'gacanta, xagga Yeruusaalem u soo jeestay. isaga iyo kuwa ka weyn by dhalashada iyo labada, la dhar joonyad, dhacay nugul dhulka.
21:17 Markaasaa Daa'uud wuxuu Ilaah ku: "Anigu ma waxaan ahay ma mid ka mid ah kuwaas oo ku amray in dadka la soo tiriyo? Waxa aan dembaabay waa; waa aniga kan sharka ah sameeyey. adhi Tani, maxay u qalmaan? Rabbiyow, Ilaahayow, Waxaan kaa baryayaa inaad, gacantaadu ha la iga gees ah iyo reerka aabbahay jeestay. Laakiin yaanay dadkaaga waa la laayay. "
21:18 Markaasaa malaa'igtii Rabbigu wuxuu baray Gaad Daa'uud ku tidhaahdaa si uu u koro oo meel allabari hadhuudhka lagu tumi jiray ee Aarnaankii reer Yebuus lahaa in ay Rabbiga ah Ilaaha dhiso.
21:19 Sidaa darteed, David kor u, waafaqsan eraygii Gaad, taas oo uu kala hadlay isaga magaca Rabbiga.
21:20 Haddaba markii Aarnaan ayaa kor u eegay oo ay arkeen oo Angel ah, isaga iyo afar wiil oo waxay ku dhuunteen. Waayo, waagaas, ayuu wuxuu tumayay sarreen dul dabaqa.
21:21 Markaasuu, sida Daa'uud wuxuu Aarnaan ku soo dhowaaday, Aarnaan arkay isaga, oo wuxuu ka tumi jiray u soo baxay inuu isaga ku qaabbilo. Oo isna wuxuu isagii uga baqi nugul dhulka ku.
21:22 Markaasaa Daa'uud wuxuu ku yidhi isagii: "Meeshan ee lagu tumo i sii, si aan laga yaabaa in meel allabari Rabbiga ha ku dul dhiso. Oo waa inaad iga lacag badan aqbalaan sida u qalantaa waa, sidaa darteed in belaayadu ay dadka ka joojin. "
21:23 Laakiin wuxuu Aarnaan wuxuu Daa'uud ku yidhi: "Qaado, oo boqorow, sayidkaygiiyow, sameeyaan wax alla wixii isaga ka farxiya. Waxaa intaa dheer, dibida waxaan siin sidoo kale sida la gubo, iyo mixaraatka saara si ay qoryihii, oo wuxuu sarreenka kaga allabarigii. Waxaan kuu soo bixin doonaa oo dhan si xor ah. "
21:24 Oo Boqor Daa'uudna wuxuu ku yidhi isagii: "Saas ma aha ee waxaa saasay noqon doontaa. Halkii, Waxaan idin siin doonaa lacag, sida ugu badan waxaa haboon. Waayo, waxaan waa in aan ku qaadan in aad ka, Kuna bixiyaan in la gubo Rabbiga waxba ku kici. "
21:25 Sidaa darteed, David siiyey Aarnaan, waayo, meeshii, ka miisaan aad u kaliya ee lix boqol oo sheqel oo dahab ah.
21:26 Oo meel allabari Rabbiga halkaas ka dhisay meel. Oo wuxuu ku bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaadiino, oo wuxuu Rabbiga u baryay. Oo isna wuxuu isagii Dhumeen dab samada ka soo kor dhacay meeshii la gubo diraya.
21:27 Markaasaa Rabbigu wuxuu baray Angel ah, oo wuxuuna u Jeedsaday uu seeftayda galkeeda.
21:28 Markaasuu, maxaa yeelay, Rabbigu isaga u Dhumeen ee lagu tumi jiray ee Aarnaankii reer Yebuus leeyahay ee, David markiiba waxaa allabari.
21:29 Laakiin taambuugga Rabbiga, oo Muuse sameeyey oo lamadegaanka ku yaal, iyo meesha allabariga ee gubo, isla wakhtigaasba waxaa ku yiil meeshii sare oo Gibecoon.
21:30 Markaasaa Daa'uud ayaa awoodi waayay inuu meesha allabariga si ay u tagaan, si uu halkaas ku baryayaaye, waxaa laga yaabaa in ay Ilaah. Waayo, isagu wuxuu la dhuftay cabsi aad u weyn, maxaa yeelay, seef of malaa'igtii Rabbiga.
22:1 Oo Daa'uudna wuxuu yidhi, "Kanu waa gurigii Ilaah, oo tanuna waa meeshii allabariga ee la gubo oo reer binu Israa'iil. "
22:2 Oo wuxuu iyagii ku baray in ay soo ururiyaan oo dhan kuweeda cusub ka yimid dalka reer binu Israa'iil. Oo kuwan uu magacaabay stoneworkers, inay dhagxan iyo si ay u turxaan-, sidaa darteed laga yaabo in uu dhiso gurigii Ilaah.
22:3 Sidoo kale, David diyaariyey bir ah oo aad u badan si ay u isticmaalaan ee ciddiyaha oo irdaha, iyo dun iyo kala-goysyada, iyo sidoo kale culayska kharash garaysay oo naxaas ah.
22:4 Sidoo kale, geedaha kedarka ah, oo ay reer Siidoon iyo reer Turos ayaa Daa'uud u soo safriyo, ma ahaayeen in la tiriyo awoodi.
22:5 Oo Daa'uudna wuxuu yidhi: "Wiilkayga Sulaymaan waa wiil yar oo dhaylo ah. Laakiin gurigii aan jeclahay inaan la dhisay Rabbiga waxaa ku waajib ah in ay sidaas u weyn in ay tahay caanka ah ee gobolka kasta. Sidaa darteed, Waxaan kuu diyaarin doonaa waxa lagama maarmaan isaga u noqon doonaa. "Oo sababtaas, intuusan dhiman, wuxuu ka diyaariyey dhan kharashka.
22:6 Oo isna wuxuu Sulaymaan u yeedhay, wiilkiisa. Oo wuxuu isaga baray inuu guri u dhiso Rabbiga, Ilaaha reer binu Israa'iil.
22:7 Markaasaa Daa'uud wuxuu Sulaymaan ku yidhi: "Wiilkeyga, waxay ii ahayd doonista inaan guri u dhiso magaca Rabbiga Ilaahayga ah.
22:8 Laakiinse waxaa ii yimid Eraygii Rabbiga oo ka, oo wuxuu ku yidhi: Adigu waxaad daadisay dhiig badan, oo aad ku dagaalameen in dagaallo badan. Oo ma aad awooddid inaad guri u dhisto magacayga, sidaas u weyn oo ahayd Daadinta dhiigga i hor.
22:9 ina kii dhalan doona idiin ahaan doonaa nin aad u xasilloon. Waayo, anigu waxaan ka dhigi doonaa inuu nasasho ka cadaawayaashiisa oo dhan dhinac kasta. Oo Sababtan awgeed, waxaa loogu yeedhi doonaa nabad ah. Iyo nabadda iyo xasilloonida si Israa'iil waxaan siin doonaa inta lagu guda jiro maalmaha oo dhan.
22:10 Oo isna guri buu magacayga u dhisi doona. Oo wuxuu ahaan doonaa wiil ii, oo anna waxaan noqon doonaa Aabbe isaga u. Oo waxaan carshiga boqortooyadiisa u xoogayn doonaa taliya reer binu Israa'iil ku yidhi daa'in. '
22:11 Haddaba, wiilkayga, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu idinla jiro, iyo inaad ku liibaantid waxa oo guri u dhiso Rabbiga Ilaahiinna ah, siduu kaaga hadlay.
22:12 Sidoo kale, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu idin siiyo caqli iyo waxgarasho, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu Israa'iil u taliyo oo ah inay ilaaliyaan sharciga Rabbiga Ilaahiinna ah.
22:13 Waayo, markaas waxaad awoodi doontaa inaad si loo horumariyo noqon doonaa, haddii aad u dhawrtaan amarrada iyo xukummadayda in Rabbigu baray Muuse bar si loo Israa'iil. Noqo xoogaystay iyo dhaqmaan Ljunberg. Waa in aadan ka cabsan, iyo ma aha in aad ka Cabsada.
22:14 Bal eeg, in aan saboolnimada aan u diyaariyey kharashka guriga Rabbiga: boqol kun oo talanti oo dahab ah, iyo hal milyan oo ka mid ah talanti oo lacag ah. Oo weliba sida runta ah, waxaa ma qiyaasa naxaasta iyo birta ah. Waayo, magnitude shisheeyaa tiriyey. Oo waxaan waxay hagaajiyeen alwaaxdii iyo dhagxantii mashruuca oo dhan.
22:15 Sidoo kale, aad leedahay farsamo aad u badan: stoneworkers, iyo waxdhisayaashii derbiyada, iyo saanacyadii oo qoryo, iyo kuwa ugu miyir ka shaqaynayeen fanka kasta samaynaya,
22:16 dahab iyo lacag, iyo naxaas, iyo bir,, kuwaas oo tiro ma leh. Sidaa darteed, kacaan oo fal. Markaasaa Rabbigu idinla jiri maayo. "
22:17 Sidoo kale, David baray oo dhan odayaashii reer binu Israa'iil, si ay u caawiyaan lahaa wiilkiisa Sulaymaan,
22:18 oo wuxuu ku yidhi: "Waxaad kala garan in Rabbiga Ilaahiinna ah waa inaad la, iyo in uu idin siiyey on dhinacyada oo dhan, iyo in uu u dhiibay cadaawayaashiinna oo dhan gacmahaagaan kuu soo geliyey, iyo in dalka la jebiyey Rabbiga hortiisa iyo dadka uu ka hor.
22:19 Sidaa darteed, bixiyaan Quluubtooda iyo naftiinna aad, si aad u doondoonaan Rabbiga Ilaahaaga ah. Oo ku kici iyo in la dhiso meesha quduuska ah Rabbiga ah Ilaaha, si sanduuqii axdiga Rabbiga, iyo weelashii quduus xagga Rabbiga, la keenay waxaa laga yaabaa in guriga loo dhisayo magaca Rabbiga galay. "
23:1 Markaasaa Daa'uud, isagoo duq ah oo cimri weyn, wiilkiisii ​​Sulaymaan magacaabay boqor u taliya dalka Israa'iil.
23:2 Oo wuxuu soo wada ururiyey amiirradii reer binu Israa'iil, iyo wadaaddada reer Laawi iyo sidoo kale.
23:3 Iyo kuwii reer Laawi lagu tiriyey, da'da soddon sannadood jirtay iyo intii ka sii weynayd. Oo waxaa laga dhex helay siddeed iyo soddon kun oo nin.
23:4 Kuwaas oo kala ah, afar iyo labaatan kun oo la doortay oo loo qaybiyey wasaaradda guriga Rabbiga. Haddaba lix kunna waxay ahaayeen niman iyo xaakinno.
23:5 Waxaa intaa dheer, afar kunna waxay ahaayeen iridjoogayaal. Iyo tiro la mid ahaayeen kuwii gabayaaga ahaa of sabuurro Rabbiga u, alaabtii muusikada oo uu u sameeyey music ah.
23:6 Oo Daa'uud wuxuu iyagii u qaybiyey koox koox sidii ay ahaayeen wiilashii Laawi,, si gaar ah, Gershoom, iyo Qohaad, iyo Meraarii.
23:7 Oo reer Gershoomna: Lacdaan iyo Shimcii.
23:8 Kuwii reer Lacdaan: hogaamiyaha Jahiel, iyo Seetaam, iyo Yoo'eel, saddex.
23:9 Wiilashii Shimciina: Shelomood, iyo Xasii'eel, iyo Xaaraan, saddex. Intaasu waxay ahaayeen madaxdii qolooyinkii reer Lacdaan.
23:10 Markaasaa wiilashii Shimcii: Yaaxad, iyo Azizah, iyo Yecuush, iyo Beriicaah. Kuwaasu waxay ahaayeen wiilashii Shimcii, afar.
23:11 Haddaba Yaaxad kowaad wuxuu ahaa, Azizah labaad, laakiinse Yecuush iyo Beriicaah wiilal badan ma ay lahayn,, iyo sabab this waxay ahaayeen sidii hal qoys oo ka mid ah guriga.
23:12 Wiilashii Qohaadna: Camraam, iyo Isehaar, Xebroon, iyo Cusii'eel, afar.
23:13 Wiilashii Camraamna: Haaruun iyo Muuse. Haddaba Haaruun waxaa gooni si uu adeego ee Quduuskii Quduusyada, isaga iyo wiilashiisii ​​weligeedba, iyo si uu Rabbiga foox u gubaan, sida uu sheegay xaflad, iyo si uu magiciisa ku duceeyaan weligeed ah.
23:14 Wiilashii Muusena, ninkii Ilaah, ayaa sidoo kale laga tiriyey qabiilka reer Laawi.
23:15 Wiilashii Muusena: Gershoom iyo Eliiceser.
23:16 Oo reer Gershoomna: Shebuu'eel ugu horeysay ee.
23:17 Haddaba Ina Eliiceserna wuxuu ahaa Rexabyaah ugu horeysay ee. Oo waxaa jiray innaba wiilal kale ma Eliiceser. Laakiin waxaa wiilashii Rexabyaah ka ayaa aad bay u tarmeen.
23:18 Wiilashii Isehaar: Shelomiidna ugu horeysay ee.
23:19 Wiilashii Xebroonna: Yeriyaah oo ah, Iyo Amaryaah labaad, Yaxasii'eel saddexaad, Yeqamcaam oo kii afraadna.
23:20 Oo ahaa wiilashii Cusii'eel: Micah ugu horeysay ee, Yishiyaah labaad.
23:21 Wiilashii Meraariina: Maxlii iyo Mushii,. Wiilashii Maxliina: Elecaasaar iyo Qiish.
23:22 Markaas Elecaasaarna wuxuu dhintay, iyo wiilal ma uu lahayn, isagoo gabdho keliya mooyaane. Oo sidaas daraaddeed wiilashii Qiish, walaalahood, iyaga guursaday.
23:23 Wiilashii Mushiina: Maxlii, iyo Ceeder, iyo Yereemood, saddex.
23:24 Kuwanu waa wiilashii Laawi, in ay sii xaqeeda iyo qoysaska, Hoggaamiyayaasha in markooda, iyo tirada mid kasta oo ka mid ah madaxdii ahaa kuwa lagu samaysaan shuqullada wasaaradda guriga Rabbiga, intii labaatan sano iyo intii ka sii weynayd.
23:25 Waayo, Daa'uud wuxuu yidhi: "Rabbigu wuxuu, Ilaaha reer binu Israa'iil, nasiyey dadkiisa, iyo rugtii Yeruusaalem iyo xataa tan iyo daa'in.
23:26 Tanuna kuuma ahaan doonto xafiiska reer Laawi mar dambe inay qaadaan taambuugga oo dhan qalabka ay u adeegsan lahaayeen wasaaradda. "
23:27 Sidoo kale, sida ay amarradaada ugu dambeeyey oo Daa'uud, oo reer Laawi ka waxaa lagu tirin doonaa tiro ka labaatan sano iyo intii ka sii weynayd.
23:28 Oo iyana waxay ahaan hoos baxeen gacantii dadka wiilashii Haaruun waa inuu, daryeelka guriga Rabbiga, in balbalada, iyo qowladaha, oo meeshii isdaahirinta, iyo meesha quduuska ah, iyo kulli shuqulkii adeegidda guriga Rabbiga ku.
23:29 Laakiinse wadaaddadu waxay noqon doonaan in ka badan kibista tusniinta, Oo allabarigii bur wanaagsan oo sarreen, iyo kibis aan khamiir lahayn, iyo digsiga shiileyso, iyo galidda ah, iyo in ka badan culays kasta iyo qiyaas.
23:30 Oo weliba sida runta ah, Kuwii reer Laawi soo istaagi doonaan inay qirtaan iyo in ay u gabyi doonaa Rabbiga, Subax dii, iyo sidoo kale fiidkii,
23:31 sida ugu badan ee qurbaan hadhuudh ah oo ka mid ah gubo Rabbiga, sidii sabtiyada iyo bilaha cusub, iyo iidaha kale, sida ay tirada iyo xafladaha kasta iyo wax kasta oo, weligoodba Rabbiga hortiisa.
23:32 Oo iyagu ha sii observances taambuugga axdiga, iyo cibaadaysi meesha quduuska ah, iyo dhaqmayo oo ka mid ah wiilashii Haaruun, walaalahood, si ay u adeegaan guriga Rabbiga.
24:1 Haddaba kuwanu waxay ahaayeen kooxihii reer Haaruun. Wiilashii Haaruun: Naadaab, iyo Abiihuu, iyo Elecaasaar, iyo Iitaamaar.
24:2 Laakiinse Naadaab iyo Abiihuu aabbahood way ka hor dhinteen, oo aan carruurta lahayn. Oo sidaas daraaddeed Elecaasaar iyo Iitaamaar xafiiska wadaadnimada.
24:3 Oo Daa'uud wuxuu iyagii u qaybiyey, in uu yahay, Saadooq oo ahaa reer Elecaasaar, iyo Axiimeleg oo ahaa reer Iitaamaar, sidii kooxahoodii iyo wasaarada.
24:4 Oo waxaa raggii madaxda dhexdoodii laga helay dad badan oo dheeraad ah oo ka mid ah reer Elecaasaar, badan oo ka mid ah wiilashii Iitaamaarna. Sidaa darteed, wuxuu iyagii u kala qaybiyey si ay halkaas joogay, oo ahaa reer Elecaasaar, lix iyo toban hoggaamiyayaasha qolo qolo, oo ahaa reer Iitaamaar sideed qolo qolo iyo guryahooda.
24:5 Markaasuu iyaga u qaybiyey wuxuu ku dhex, labada qoysaska, by badan. Oo waxaa jiray madaxda meesha quduuska ah iyo hoggaamiyayaasha Ilaah, sida ugu badan ee reer Elecaasaar ka sida wiilashii Iitaamaarna.
24:6 Oo karraanigii ahaa Shemacyaah, ina Netaneel, reer Laawi ah, qoray hoos boqorkii iyo madaxda ka hor, ay la jiraan Saadooq, wadaadkii, iyo Axiimeleg, ina Aabyaataar, iyo sidoo kale madaxda qolooyinkii wadaaddada iyo reer Laawi. Oo waxaa jiray isku guri, kaas oo fahan ahaan ka badan kuwa kale, in Elecaasaar; oo waxaa jiray guri kale, kaas oo lahaa dadka kale way ka hoosaysaa, in reer Iitaamaar.
24:7 Haddaba saamigii kowaad wuxuu u soo baxeen inay Yehooyaariib, kii labaadna Yedacyaah,
24:8 kii saddexaadna Haarim, kii afraadna Secoriim,
24:9 kii shanaadna Malkiiyaah, kii lixaadna Miyaamin,
24:10 kii toddobaadna Haqoos, kii siddeedaadna Abiiyaah,
24:11 kii sagaalaadna Yeeshuuca, kii tobnaadna Shekaanyaah,
24:12 kow iyo tobnaadna Eliyaashiib, iyo tobnaadna Yaaqiim,
24:13 saddex iyo tobnaadna Xufaah, afar iyo tobnaadna Yeshebe'aab,
24:14 shan iyo tobnaadna Bilgaah, lix iyo tobnaadna Immeer,
24:15 toddoba iyo tobnaadna Xeesiir, siddeed iyo tobnaadna Hafisees,
24:16 sagaal iyo tobnaadna Fetaxyaah, kii labaatanaadna Yexesqeel,
24:17 the-kow iyo labaatanaad Yaakiin, iyo labaatan labaad Gaamuul,
24:18 kii saddex iyo labaatanaadna Dalaayaah, afar iyo labaatanaad ayaa Macasyaah.
24:19 Kuwaasu waxay ahaayeen koorsooyinka sida ay wasaaradaha ay, si ay u geli doonto guriga Rabbiga galay in wada qalbi ah la waxqabadkooda, hoos baxeen gacantii dadka Haaruun, aabbahood, sidii Rabbigu, Ilaaha reer binu Israa'iil, ku amray.
24:20 Hadda oo ahaa reer Laawi, kuwaas oo ka harsan, waxaa jiray soo baxay Shuubaa'eel, wiilashii Camraam waxaa ka, iyo Yexdeyaah, wiilashii Shuubaa'eelna waxaa ka.
24:21 Sidoo kale, waxaa jiray Yishiyaah, Hogaamiyaha waxaa wiilashii Rexabyaah ka,
24:22 oo daacad ah Shelomood, ina Isehaar, iyo Yaaxad, ina Shelomood,
24:23 iyo wiilkiisa, Yeriyaah oo ah, Iyo Amaryaah labaad, Yaxasii'eel saddexaad, Yeqamcaam oo kii afraadna.
24:24 The ina Cusii'eel ahaa Micah. Wiilka uu dhalay Miikaah ahaa Shaamiir.
24:25 Oo Miikaah walaalkiisna wuxuu ahaa Yishyaah,. Iyo ina joogay Yishyaah oo ahaa Sekaryaah.
24:26 Wiilashii Meraariina waxay ahaayeen Maxlii iyo Mushii,. Wiilka uu dhalay Cusiyaah Benoo.
24:27 Sidoo kale, ina Meraarii: Cusiyaah, iyo Shoham, iyo Sakuur, iyo Hebri.
24:28 Intaa waxaa dheer, ina Maxlii jiray Elecaasaar, kuwaas oo carruurna ma ay lahayn.
24:29 Runtii,, oo ahaa ina Qiish, oo ahaa Yeraxme'eel.
24:30 Wiilashii Mushiina waxay ahaayeen Maxlii, Eder, iyo Yeriimood. Kuwanu waxay ahaayeen wiilashii Laawi iyo sidii ay guryaha qoysaskooda.
24:31 Oo iyana waxay sidoo kale saami riteen saabsan walaalahood, oo ahaa wiilashii Haaruun, Boqor Daa'uud ka hor, oo Saadooq, iyo Axiimeleg, iyo madaxdii qolooyinkii wadaaddada iyo reer Laawi, sida ugu badan ee ku saabsan odayga sida kan yar. Oo saamigii waxyaalahan oo dhan Caddaalad qaybsan.
25:1 Markaasaa Daa'uud iyo xaakinnadii ciidanka wuxuu gooni ka dhigay, wasaaradda, oo ahaa ilma Aasaaf, iyo reer Heemaan, iyo reer Yeduutuun,, oo waxay ahaayeen in la sameeyey kataarado iyo shareerado iyo suxuun laysku sii sheegaan, waafaqsan tiradooda, isagoo ka go'an in ay xafiiska loo magacaabay.
25:2 Laga soo bilaabo waxay ahaayeen reer Aasaaf: Sakuur, iyo Yuusuf, iyo Netanyaah, iyo Asareelaah, oo ahaa ilma Aasaaf, hoos baxeen gacantii reer Aasaaf, wax sii boqorka ag.
25:3 Markaasaa reer Yeduutuun, oo wiilashii Yeduutuunna: Gedalyaah, Serii, Yeshacyaah, iyo Xashabyaah, iyo Matityaah, lix, hoos baxeen gacantii dadka aabbahood Yeduutuun, oo la sii sheegid alaab xadhko leh, halka qiranaya oo Rabbiga ammaanaya.
25:4 Sidoo kale, Heemaan, oo wiilashii Heemaanna waxay: Buqiyaah, Matanyaah, Cusii'eel, Shebuu'eel, iyo Yeriimood, Xananyaah, Xanaanii, Elii'aataah, Giddlti, iyo Romamtii Ceser, iyo Yaashbeqaashaah, Malloth, Hootiir, Maxasii'ood,.
25:5 Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Heemaan, ka ahaa waxarkihii boqorka ee ahaa erayadii Ilaah, si ay kor u qaaday geeskii. Oo Ilaahna wuxuu Heemaan iyo afar iyo toban wiil iyo saddex gabdhood siiyey.
25:6 Oo intaas oo dhammu, hoos gacanta aabbahood, ayaa loo qaybiyey si ay u gabyi macbudka Rabbiga, suxuun laysku garaaco, iyo shareerado, iyo kataarado,, Wasaaradda guriga Rabbiga boqorka ag, si gaar ah, Aasaaf, iyo Yeduutuun, iyo Heemaan.
25:7 Hadda tiro ka mid ah kuwan, walaalahood, kuwaas oo bara gabaygii ahaa ammaanta Rabbiga, dhammaan macallimiinta, waxay ahaayeen laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan.
25:8 Oo iyana waxay riteen saami in markooda ay, odayga si siman oo leh ka yar, waxay soo wada barteen la garanaynini ah.
25:9 Haddaba saamigii kowaad wuxuu u soo baxeen inay Joseph, kuwaas oo ahaa reer Aasaaf; labaad soo baxay Gedalyaah, isaga iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba oo ahaa in ay, laba iyo toban.
25:10 Midda saddexaad tageen u soo baxay Sakuur, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:11 Kii afraadna wuxuu u soo baxay Yisrii tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:12 kii shanaadna wuxuu u soo baxay Netanyaah tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:13 Kii lixaadna wuxuu u soo baxay Buqiyaah tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:14 Kii toddobaadna wuxuu u soo baxay Yeshareelaah tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:15 Kii siddeedaadna wuxuu u tegey u soo baxay Yeshacyaah, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:16 Kii sagaalaadna wuxuu u tegey inuu Matanyaah, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:17 Kii tobnaadna wuxuu u soo baxay Shimcii tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:18 kow iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay Casareel tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:19 iyo tobnaadna wuxuu u tegey inuu Xashabyaah, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:20 saddex iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay Shuubaa'eel tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:21 afar iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay Matityaah tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:22 shan iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay Yereemood tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:23 lix ka baxay Xananyaah, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:24 toddoba tegey Yaashbeqaashaah, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:25 siddeed iyo tobnaadna wuxuu u soo baxay Xanaanii u tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:26 Kii sagaal tegey Mallootii, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba oo ahaa in ay, laba iyo toban.
25:27 Kii labaatanaadna wuxuu u soo baxay Elii'aataah tegey, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:28 Kow iyo labaatanaad ayaa u tegey u soo baxay Hootiir, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:29 The labaatan labaad tageen u soo baxay Giddaltii, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:30 The saddex iyo labaatanaad tageen u soo baxay Maxasii'ood, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
25:31 Afar iyo labaatanaad ayaa u tegey u soo baxay Romamtii, iyo wiilashiisii ​​iyo walaalihiisba in, laba iyo toban.
26:1 Haddaba kooxihii iridjoogayaashiina waxaa ka joogay, ka Qorax: Meshelemyaahna, ina Qore, oo ahaa reer Aasaaf.
26:2 Meshelemyaahna wuxuu lahaa wiilal: Curadkiisii ​​wuxuu ahaa Sekaryaah, Kii labaadna Yediica'eel, Kii saddexaadna Sebadyaah, Kii afraadna Yatnii'eel,
26:3 Kii shanaadna Ceelaam, Kii lixaadna Yehooxaanaan, Kii toddobaadna Eliihooceenay.
26:4 Markaas waxay ahaayeen reer Cobeed: Shemacyaah oo ahaa curadkii, Kii labaadna Yehoosaabaad, Kii saddexaadna Yoo'aax, Sachar kii afraadna, Kii shanaadna Netaneel,
26:5 Kii lixaadna Ammii'eel,, Toddobaadna Isaakaar, Kii siddeedaadna Fecultay. Waayo, Rabbigu wuxuu u duceeyay.
26:6 Haddaba wiilkiisii ​​Shemacyaahna waxay, waxaa jiray wiilal baa u dhashay, taliyayaashii qoysaskooda. Waayo, iyagu waxay ahaayeen rag aad u xoog badan.
26:7 Markaasaa wiilashii Shemacyaahna waxay ahaayeen Cotnii, iyo Refa'eel, isaga iyo Cobeed, Elsaabaad iyo walaalihiisba oo ahaa, nin aad u xoog badan, sidoo kale waxaa u talinayay Eliihuu iyo Semakiyaah.
26:8 Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen wiilashii Cobeed Edoom ka: iyaga iyo wiilashoodii iyo walaalahood, aad taam wasaaradda, ka Cobeed Edoom laba iyo lixdanka.
26:9 Markaasaa waxaa Meshelemyaahna wuxuu lahaa wiilal iyo walaalahood, rag aad u xooggan, siddeed iyo toban.
26:10 Hadda, ka Xosaah, in uu yahay, reer Meraarii ka: Shimrii hogaamiyaha, waayo, ma wuxuu lahaa wiil oo ahaa curadkii, oo sidaas, taas aawadeed, aabbihiis baa loo magacaabay hoggaamiyaha,
26:11 Labaadna wuxuu ahaa Xilqiyaah, Kii saddexaadna Tebalyaah,, Kii afraadna Sekaryaah. Oo intaas oo dhammu, wiilashiisii ​​iyo walaalihiis Oo Xosaah, ahaayeen saddex iyo toban.
26:12 Kuwani ayaa loo qaybiyey sidii iridjoogayaal, si ay madaxda iyo tiirarkeeda, iyo sidoo kale walaalahood, had iyo goor ugu adeegi jiray gurigii Rabbiga.
26:13 Markaas bay saami u riteen si siman, labada ugu yar iyo weyn, qolo qolo, ku saabsan mid kasta oo ka mid irdaha.
26:14 Oo saamigii bari ka dhacday u soo baxay Shelemyaah. Laakiin wiilkiisii ​​Sekaryaah, nin aad u miyir iyo bartay, qaybta waqooyi helay saami.
26:15 Runtii,, Cobeed Edoom iyo wiilashiisii ​​helay in koonfur, in qayb ka mid ah guriga, halkaas oo golaha odayaasha ahaa.
26:16 Shufiim iyo Xosaahna waxaa helay in xagga galbeed, ag iridda keenta in jidka loo fuulaana, mid post kale haysta.
26:17 Runtii,, oo xagga bari waxaa joogi jiray lix reer Laawi, iyo xagga woqooyi waxaa joogay afar maalin kasta, ka dibna xagga koonfureed ayaa sidoo kale waxaa joogay afar maalin kasta. Iyo meesha golaha ahaa, waxaa jiray laba iyo laba.
26:18 Sidoo kale, in unugyada iridjoogayaashiina xagga galbeed, waxaa joogay afar jidka, iyo laba unug kasta.
26:19 Intaasu waxay ahaayeen kooxihii of irid-dhawryadii oo ahaa reer Qohaad, iyo Meraarii oo.
26:20 Haddaba Axiiyaah waxba wuxuu u talin jiray khasnadihii guriga Ilaah, iyo weelashii quduuska.
26:21 Kuwii reer Lacdaan, reer Gershoon: ka Ladan, Hoggaamiyayaasha ee ahaa qolooyinkii reer Lacdaan iyo reer Gershoon: Yexii'eelii,.
26:22 Iyo wiilashii Yexii'eelii: Seetaam, iyo Yoo'eel; walaalihiis waxay u talin jireen khasnadihii guriga Rabbiga,
26:23 la Camraam, iyo Isehaar, iyo Xebroon, iyo reer Cusii'eel.
26:24 Hadda, Shebuu'eel, oo ahaa ina Gershoom, oo ahaa reer Muusena, waxay ahayd in meesha ugu horeysa khasnadihii,
26:25 oo ay la socdaan walaalihiis, Eliiceser, oo wiilkiisii ​​Rexabyaah, oo wiilkiisii ​​Yeshacyaah, oo wiilkiisii ​​Yooraam, iyo sidoo kale wiilkiisa Sikrii, oo wiilkiisii ​​Shelomood.
26:26 isla Shelomood iyo walaalihiis waxay u talin jireen khasnadihii alaabta quduuska ah, taasoo uu Boqor Daa'uud wuxuu quduus, iyadoo madaxda qoysaska, iyo tribunes ah, iyo boqol-, iyo saraakiishii ciidanka.
26:27 Waxyaalahaasu waxay ka ahaayeen dagaalladii ka iyo hadhaagii ugu fiican ee dagaallada, oo ay quduus ka dhigay ee dayactirka iyo Alaabeynta macbudka Rabbiga.
26:28 Haddaba waxyaalahan oo dhan quduus by Samuel, oo wax arke ahaa, iyo Saa'uul, oo ahaa ina Qiish, iyo Abneer, oo ahaa ina Neer, iyo Yoo'aab, oo ay Seruuyaah dhashay. All kuwa isdaahiriyeen waxay ka hooseeyeen jireen gacantii Shelomood iyo walaalihiis.
26:29 Oo weliba sida runta ah, Kenanyaah iyo wiilashiisii ​​oo waxay u talin jireen reer Isehaarna, waayo, shuqullada bannaanka ku saabsan Israa'iil, si ay u baraan iyo in ay iyaga u xukumi.
26:30 Hadda ka Xebroon, Oo Xashabyaah iyo walaalihiis, hal kun iyo toddoba boqol oo nin oo aad u xoogan, waxay u talin jireen reer binu Israa'iil oo Webi Urdun shishadiisa xagga galbeed, in kulli shuqulkii Rabbigu wuxuu, iyo shuqulka boqorka.
26:31 Oo amiirka reer Xebroon ahaa Yeriyaah, sidii ay reerahoodu ahaayeen iyo qaraabada. Oo sannaddii afartanaad oo boqortooyadii Daa'uud, ahaa ayaa loogu tiriyey, oo waxaa laga helay rag aad u xoog badan in Yacser Gilecaad.
26:32 Iyo walaalihiis oo da 'a baaluq waxay ahaayeen laba kun iyo toddoba boqol oo madaxda qoysaska. Markaasaa Boqor Daa'uud wuxuu iyagiina wuxuu dhex dhigay mas'uul ka ah reer Ruubeen, iyo reer Gaad, iyo qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh, in dhammaan wasaaradaha Ilaah iyo boqorka.
27:1 Haddaba reer binu Israa'iil, sida tiradoodu tahay, madaxda qoysaska, tribunes ah, iyo boqol-, iyo ugaasyadii, adeegi jiray si ay boqorka uga shirkadaha ay, galaya iyo kuwa ka fogaadaan in bil kasta oo sannadka ah sidii ay ahaayeen ka masuulka, waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun.
27:2 Yaashaabcaam, ina Sabdii'eel, wuxuu ahaa mas'uul ka ah shirkaddii ugu horreysay bishii kowaad; oo isaga ka yar waxay ahaayeen afar iyo labaatan kun.
27:3 Wuxuu ahaa reer Feres ka, oo isna wuxuu ahaa madaxdii reer dhammaan madaxda kale ee ciidanka, bishii kowaad.
27:4 Shirkadda bishii labaad lahaa Doday, Axoo'ax; oo waxay ka daba waxaa jiray kale, la odhan jiray Miqlood, oo u talin jiray qayb ka mid ah ciidankii reer afar iyo labaatan kun.
27:5 Sidoo kale, Taliyaha shirkadda saddexaad, bisheedii saddexaad, wuxuu ahaa Benaayaah, oo ahaa ina wadaadkii Yehooyaadaac; oo isaga kooxdiisana waxaa waxaa ku jiray afar iyo labaatan kun.
27:6 kaasu waa Benaayaah oo ahaa kii oo soddonka ka mid ahaa ugu adag, oo ahaa badnaa soddonka. Laakiin wiilkiisii, Cammiisaabaad, wuxuu ahaa mas'uul ka ah shirkadiisa.
27:7 Midda afraad, ee bishii afraad, wuxuu ahaa Casaaheel, oo Yoo'aab walaalkiis ahaa, oo wiilkiisii ​​Sebadyaahna wuu isaga ka dib; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:8 Hogaamiyaha shanaad, ee bishii shanaad, wuxuu ahaa Shamhuud, Yisraax; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:9 Kii lixaadna wuxuu, oo bishii lixaad, wuxuu ahaa Ciiraa, ina Ciqeesh oo ahaa, Teqooca a; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:10 Kii toddobaadna wuxuu, ee bishii toddobaad, wuxuu ahaa Xeles, Oo ahaa reer Feloonii a Oo wiilashii Efrayim iyo ka; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:11 kii siddeedaadna, oo bishii siddeedaad, wuxuu ahaa Sibbekay, Xushaad ka ahay jinsiga reer Serax; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:12 sagaalaad, ee bishii sagaalaad, wuxuu ahaa Abiiceser, Canaatood ah reer Benyaamiin ka; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:13 Kii tobnaadna wuxuu, ee bishii tobnaad bixi, wuxuu ahaa Maharay, oo wuxuuna ahaa reer Netofaah oo ka ahaa reer Serax saamiyada; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:14 kow iyo tobnaadna wuxuu, tobnaad ee bishii kow, wuxuu ahaa Benaayaah, Oo ahaa reer Fircaatoon Oo wiilashii Efrayim iyo ka; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:15 Kii laba iyo tobnaadna, bishii laba iyo tobnaad, wuxuu ahaa Xelday, Oo ahaa reer Netofaah oo ka ahaa reer Cotnii'eel saamiyada; iyo in uu shirkad waxaa jiray afar iyo labaatan kun.
27:16 Haddaba kuwii ugu horreeyey waxaa qabiilooyinkii reer binu Israa'iil ahaayeen: Ruubeen, Eliiceser, ina Sikrii, ahaa taliyihii; ka badan Simecoon, Shefatyaah, oo ahaa ina Macakaah, ahaa taliyihii;
27:17 reer Laawi, Xashabyaah, ina Qemuu'eel; ka badan Haaruun, Saadooq;
27:18 Yahuudah, Eliihuu, kii walaal u yahay David; ka badan Isaakaar, Coomrii, oo ahaa ina Miikaa'eel;
27:19 ka badan Sebulun,, Yishmacyaah, ina Cobadyaah; ka badan Naphtalites ah, Yereemood, ina Casrii'eel;
27:20 in ka badan wiilashii Efrayim,, Hoosheeca, ina Casasyaah; qabiil badhkiis mid ka mid ah Manaseh, Joel, ina Fedaayaah;
27:21 iyo in ka badan kala badh ka mid ah qabiilka reer Manaseh oo Gilecaad, waxaa, ina Sekaryaah; markaas Benyaamiin, Yacasii'eel, ina Abneer;
27:22 weli si dhab ah, Casareel, oo ahaa ina Yeroxaam, oo ahaa reer Daan. Kuwaasu waxay ahaayeen madaxda reer binu Israa'iil.
27:23 Laakiinse Daa'uud meeshaas ma ahaa diyaar u ah inay soo tirisaa intii labaatan sannadood jirtay iyo intii ka yar. Waayo, Rabbigu wuxuu yidhi inuu reer binu Israa'iil u tarmin doono sida xiddigaha samada oo.
27:24 Yoo'aab, oo ay Seruuyaah dhashay, bilaabay inuu dadka tirsho, laakiin ma uusan dhammayn. Waayo, taas aawadeed, cadho ay Israa'iil ku dhacday. Oo sidaas daraaddeed tirada kuwa la tiriyay ayaa waxaa aan la xiriirin ee taariikhda oo Boqor Daa'uud.
27:25 Hadda ka badan bakhaarradii boqorka waxaa u talinayay Casmaawed, oo ahaa ina Cadii'eel. Laakiinse Yoonaataan, oo ahaa ina Cusiyaah, oo ahaa kuwii bakhaarro ku yiil magaalooyinka, iyo tuulooyinka, iyo munaaradaha.
27:26 Oo ku-beereed iyo beeralayda, kuwa shaqeeyey dhulka, talinayay Cesrii, ina Keluub.
27:27 Oo ku cultivators canabka jiray Shimcii, reer Raamad, a; ka dibna waxaa u sarreeyey lagu kaydiyey khamrigii laga Sabdii, Aphonite ah.
27:28 Hadda ka badan beerihiinna saytuunka ah, iyo geedihii Asheeraah berdaha, oo joogay bannaanka, jiray Bacal Xaanaan, reer Geder, a; oo ahaa, guryihii saliidda lagu Yoo'aash.
27:29 Haddaba lo'dii la daajinayay in Sharon, Shitrai, Shaaroon a, waxay ahayd in meesha ugu horeysa; iyo in ka badan dibidii dooxooyinka, waxaa jiray Shaafaad, ina Adlay.
27:30 Runtii,, oo ahaa geel Oobiil, Ismaaciil ah; oo ahaa reer dameerihii Yexdeyaah, reer Meeronotii a.
27:31 Oo ahaa ido u talinayay Yaasiis, Hagarene a. Oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen madaxda ka badan maalkii Boqor Daa'uud.
27:32 Haddaba Yoonaataan, kaasoo adeer u ahaa David, wuxuu ahaa lataliye waxgarasho, nin garasha leh iyo scholarly; isaga iyo Yexii'eel, ina Xakmooniina, la jiray wiilashii boqorka.
27:33 Haddaba Axiitofelna wuxuu ahaa la-taliyaha boqorka; oo Xuushay, Arkii, wuxuu ahaa boqorka saaxiibkiis.
27:34 Axiitofelna waxaa ku xigay Yehooyaadaac, kaasoo ahaa ina Benaayaah, iyo Aabyaataar. Laakiin hogaamiyaha ciidanka boqorka u ahaa Yoo'aab.
28:1 Oo sidaas daraaddeed Daa'uud isugu yeedhay oo dhan odayaashii reer binu Israa'iil, taliyayaasha qabiilooyinka, iyo kuwa ka masuulka ah shirkadaha, adeegi jiray si ay boqorka uga, iyo sidoo kale ka tribunes iyo kuwo boqol askari, iyo kuwa ka masuulka ah walaxda iyo hantidii boqorka, iyo wiilashiisii, la bohommo iyo awood badan iyo kuwa ugu khibradda leh ee ciidanka, oo Yeruusaalem ku yaal.
28:2 Oo markuu boqorkii u kacday oo taagan, ayuu yiri: "Idhagayso, aniga iyo walaalahay iyo dadkaygii. Waxaan u maleynayay inaan dhisi lahaa guri, taas oo sanduuqii axdiga Rabbiga, Ilaaheennu cago Ilaah, laga yaabaa in nasan. Oo sidaas wax walba oo ay dhismaha waan diyaargareeyey.
28:3 Laakiin Ilaah baa igu yidhi: Waa inaadan guri u dhisin magacayga, maxaa yeelay, waxaad tahay nin dagaal, oo dhiig baad daadisay. '
28:4 Haddaba Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu iga doortay, guriga ka baxay oo dhan aabbahay, si aan u ahaado boqor u taliya reer binu Israa'iil u noqon lahaa weligeedba. Waayo, dalka Yahuudah ka uu u doortay madaxda; markaas gurigii dalka Yahuudahna wuxuu ka doortay reerkii aabbahay; iyo reer aabbahay ka, waxaa isagii way ka farxisay inuu i dooran boqor u taliya reer binu Israa'iil oo dhan.
28:5 Markaasuu aad u, ka mid ah wiilashayda (waayo, Rabbiga ayaa i siiyey wiilal badan) uu u doortay wiilkayga Sulaymaanna, si uu carshiga boqortooyada Rabbiga ku fadhiisto lahaa, taliya reer binu Israa'iil.
28:6 Oo isna wuxuu igu yidhi: Naa wiilkaaga Sulaymaan ayaa dhisi doona gurigayga iyo barxadahaygaba,. Waayo, waxaan u doortay inuu igu sameeyo sidii wiil, oo anna waxaan isaga u noqon doonaa sida aabbe oo kale.
28:7 Oo waxaan ka dhigi doonaa boqortooyadiisa adag, iyo xataa tan iyo daa'in, haddii uu u samray doonaa baydhnay amarradaadii iyo xukummadaadii samaynaya, sidoo kale sida maanta. '
28:8 Haddaba sidaas daraaddeed, ka hor shirkii oo dhan reer binu Israa'iil, dhageysiga Ilaaheenna, xajisaan oo wada yeelayaan amarrada Rabbiga Ilaaheenna ahu u doondoonaan, si aad u hantidaan dalka wanaagsan, iyo waxa dardaaranka laga yaabaa in aad wiilashiinna aad ka dib, xataa weligood.
28:9 Oo sidii aad u, wiilkayga Sulaymaan, taqaan Ilaaha aabbahaa, oo ugu adeeg qalbi qumman iyo maan raalli ah. Waayo, Rabbigu wuxuu baadhaa qalbiyada oo dhan, fahmaa fikirrada oo dhan maskaxda. Haddii aad isaga doondoona, waxaad ka heli doontaa isaga. Laakiinse haddaad isaga ka tanaasulaan, gees u ayuu idinka xoori doonaa weligiis.
28:10 Haddaba sidaas daraaddeed, Rabbigu wuxuu idiin doortay, si aad u dhisi lahayd guriga quduuska ah, noqon xoogaystay iyo wuxuu oofinayaa. "
28:11 Markaasaa Daa'uud wuxuu wiilkiisii ​​Sulaymaan siiyey sharaxaad ee balbaladii, iyo macbudka, iyo bakhaarradii, iyo dabaqa sare, iyo qolalka ugu hooseeya, iyo gurigii kafaaraggudka,
28:12 oo runtii sidoo kale ka mid ah maxkamadaha oo dhan in uu qorsheeyay, iyo qolalka dibadda on dhinacyada oo dhan, waayo, iyo khasnadihii guriga Rabbiga, iyo khasnadihii alaabta quduuska ah,
28:13 iyo kooxihii wadaaddada iyo kuwii reer Laawi: ku saabsan kulli shuqulkii guriga Rabbiga iyo waxyaabaha oo dhan ee wasaaradda macbudka Rabbiga.
28:14 Waxaa jiray dahab miisaankiisu yahay weel kasta oo wasaaradda, iyo sidoo kale lacag miisaankiisa kala duwan oo weelasha iyo qalabka.
28:15 Markaasuu aad u, ayuu u qaybiyey dahab ah laambadihii, iyo laambadahoodii, sida ay tahay qiyaasta of kasta oo laambadihii laambadahoodii. Sidoo kale waxay sidoo kale, ayuu u qaybiyey lacag miisaankiisa laambadood oo lacag ah iyo laambadahoodii yaryaraa ee, sida ay kala duwanaanta ay qiyaas.
28:16 Sidoo kale, wuxuu siiyey dahab ah miisaskii ay joogaan, sida ay kala duwanaanta miisaskii; sidoo kale aad u, wuxuu siiyey lacag miisaskii kuwii kale oo lacag ah.
28:17 Sidoo kale, ayuu ka dahab saafi ah qaybiyeen qabsatooyinkooda yar iyo maddiibadihii, iyo censors ah, iyo sidoo kale libaaxyada yar oo dahab ah, in wada qalbi ah, qiyaastii saxda ah oo miisaankiisu, libaax ka dib libaax. sidoo kale aad u, waayo, libaaxyada oo lacag ah, uu iska dhigo miisaanka oo kala duwan oo lacag ah.
28:18 Markaasuu, waayo, meeshii allabariga oo ku saabsan taas oo fooxa la gubay, wuxuu siiyey dahab saafi ah. Oo ka mid ah wuxuu ka dhigay wax u eg gaadhifardoodkii dalka Keruubiim, la dheereeyey baalashooda, kaas oo la cabir sanduuqii axdiga Rabbiga.
28:19 "Waxyaalahan oo dhan,"Ayuu yiri, "Iigu yimaadeen qoraal ah oo uu gacanta Rabbiga, si aan u fahmi lahaa oo dhan shuqullada hannaankii. "
28:20 David ayaa sidoo kale sheegay in wiilkiisa Sulaymaan: "Xeerka Ljunberg, iyo in la xoojiyo, oo waxay ka qaadan. waa in aan ka cabsan in aad, iyo aad waa in aan la qalbi jabina. Waayo, Rabbiga Ilaahayga ah kula jiri doonaa, oo isna ma uu iska kuu soo diri doonaa, mana aad tagayno, ilaa aad kaamil ah shaqada oo dhan wasaaradda guriga Rabbiga.
28:21 Bal eeg, Oo kooxihii wadaaddada iyo kuwii reer Laawi, wasaaradda kasta oo guriga Rabbiga ku, waxa laydin soo hor taagan. Oo waxaa loo soo diyaariyey, iyo si ay u ogaadaan, labada hoggaamiyeyaasha iyo dadka, sida si ay u fuliyaan amarradaada oo dhan. "
29:1 Markaasaa Boqor Daa'uud wuxuu la hadlay shirkii oo dhan: "Wiilkayga Sulaymaan, Ilaaha mid doortay, weli waa wiil curdan ah. Oo weliba shuqulkuna waa weyn yahay, rugtii loo diyaarinayo, ma waayo, nin, laakiin maxaa yeelay, Ilaah.
29:2 Haddaba awooda oo dhan my, Aan u diyaariyey kharashka guriga Ilaahayga: dahab alaabta oo dahab ah, iyo lacag, kuwa oo lacag ah, naxaas ah kuwa naxaasta, bir ah kuwa bir ah, iyo qoriga laga sameeyo kuwa ka sameeyey qori, iyo dhagaxyo onika la mid ah, iyo dhagaxyo sida weel alabastar, iyo dhagaxyo leh midabyo kala duwan, iyo cayn kasta oo dhagaxyo qaali ah, iyo marmar ka Paros faro badan.
29:3 Iyo marka lagu daro waxyaalaha aan ku bixiyey inaan guriga Ilaah u galay, waxaan ku siin, ka alaabtaada aniga ii gaar ah, dahab iyo lacag, waayo, macbudkii Ilaahayga, gees uga leexan doontaan waxyaalihii aan u diyaariyey, waayo, Asheeraah quduuska:
29:4 saddex kun oo talanti oo dahab ah, ka ah dahabkii Oofir, iyo toddoba kun oo talanti oo lacag ah ee aadka loo safeeyey, waayo, gilding ee derbiyada macbudka;
29:5 iyo dahab, waayo, meel kasta oo ay jirto baahi oo dahab ah, iyo lacag meel kasta oo ay jirto baahi oo lacag ah, waayo, shuqullada in la sameeyo by yaqaan gacmahooda ku qabtaan ah. Oo haddii qof si xor ah waxay bixisaa, ha maanta wuxuu gacanta ku buuxi, oo waa inuu bixiyaa wax alla wixii uu rabo inuu Rabbiga. "
29:6 Oo sidaas daraaddeed madaxda qoysaska, iyo kuwii gobta ahaa qabiilooyinka reer binu Israa'iil ka mid ah, iyo sidoo kale tribunes iyo boqol iyo taliyayaal boqorka maalkiisa, yaboohay
29:7 iyo siiyey, waayo, shuqulladii reer Rabbiga, shan kun oo talanti iyo toban kun oo sheqel oo dahab ah, toban kun oo talanti oo lacag ah, iyo siddeed iyo toban kun oo talanti oo naxaas, iyo sidoo kale mid ka mid ah boqol kun oo talanti oo bir ah.
29:8 Oo ku alla kii ka mid ah hanti ay heleen dhagaxyo qaali ah siiyey khasnadihii guriga Rabbiga, by gacantii Yexii'eel oo ahaa reer Gershoon ee.
29:9 Markaasaa dadkii aad ugu farxay raallinimadii, tan iyo markii ay ballan la hordhigaya ay raalli ka ah. Waayo, iyagu waxay ahaayeen qurbaankiisa Rabbiga u qalbigooda oo dhan. Oo Boqor Daa'uudna wuxuu farxay farxad weyn.
29:10 Markaasaa Rabbigu wuxuu u duceeyey dadkii badnaa oo dhan ka hor, oo isna wuxuu yidhi: "Waad barakaysan tihiin, Rabbiyow, Ilaaha reer binu Israa'iil, Aabbeheenna ah weligeed daa'in.
29:11 Yours, Rabbiyow, waa weynaanteedana iyo xoog iyo ammaan, iyo sidoo kale guul; iyo inaad mahadna. Waayo, wax in ay yihiin ku Sugan Samada iyo dhulka oo dhan adaa leh. Idinkaa iska leh xukunka, Rabbiyow, oo aad tahay oo dhan u taliya kor ku xusan.
29:12 Idinkaa iska leh Xoolo, oo idinkaa iska leh ammaanta. Waxaad leedahay Xukunka wax kasta. In aad gacanta aha Samo falku iyo xoogga. In aad gacanta ku weynaanta iyo amar wax kasta.
29:13 Haddaba sidaas daraaddeed, waxaan kuu qiranayaa, Ilaaheenna, oo aan ammaaneen magacaaga caan.
29:14 Bal yaan ahay anigu, iyo dadkayguse waa ayo, in aan awoodi doona inuu waxyaalahan oo dhan si aad u yabooho? All waa idinkaa. Oo sidaas daraaddeed wax alla wixii aannu gacantaada ka helay, waxaan idin siiyey.
29:15 Waayo, innagu waxaynu nahay shisheeyayaal iyo dadka cusub ee aad ka hor, sidii awowayaashayo oo dhammu waxay ahaayeen. oo cimrigayaga aan dhulka ku kor yaal waa sida hoos oo kale, oo waxaa jira dib u dhac lahayn.
29:16 Rabbiyow, Ilaahayagow, faro badan oo dhan this, taas oo aannu u diyaarinnay si guri laga yaabaa in lagu dhisay magacaaga quduuska ah, waa gacantaada ka, oo waxaas oo dhan adaa leh.
29:17 waan ogahay, Ilaahayow, in aad tijaabiso Quluubtooda, iyo inaad u jeclaataa halleeyo lillaahinimada. Sidaa darteed, daacad qalbigayga, sidoo kale ayaan waxyaalahan oo dhan bixiyey farxad. Oo weliba waxaan arkay, farxad aad u weyn, dadka aad, kuwaas oo halkan laga helay, bixiya deeqaha ay aad u.
29:18 Rabbiyow, Ilaaha awowayaashayo Ibraahim iyo Isxaaq iyo Israa'iil, ilaa waara loo ilaalin lahaa rabitaan this qalbigooda, oo ha Ujeedada weligeedba waa la sii, waayo, cibaadada oo idinka mid ah.
29:19 Sidoo kale, Waxaan siin waayay wiilkayga qalbi qumman Sulaymaan, si uu u sii amarradaada, markhaatifurkaaga, iyo xafladaha aad, oo uu si wax walba dhammayn laga yaabaa in, iyo in la dhiso laga yaabaa in macbudka, kaas oo aan u diyaariyey kharashka. "
29:20 Markaasaa Daa'uud wuxuu shirkii oo dhan baray: "Rabbiga Ilaaheenna ammaana." Markaasaa shirkii oo dhan u duceeyey Rabbiga, Ilaaha awowayaashood. Wayna sujuudeen, oo Ilaah bay jeclaa, iyo soo socda ay boqorka uga baqi.
29:21 Oo iyana waxay allabari Rabbiga u. Oo waxay bixiyeen qurbaanno la gubo ku saabsan maalinta ku xigta: mid ka mid ah kun dibi, hal kun oo wan, hal kun oo baraar ah, la cabniinka oo la dhaqan kasta, aad u faro badan, waayo, reer binu Israa'iil oo dhan.
29:22 Oo iyana way cuneen oo Rabbiga hortiisa ku cabbay maalintaas, gabay weyn. Oo iyana waxay ugu subkay Sulaymaan, oo ahaa ina Daa'uud, mar labaad. Oo iyana waxay isagii wuu subkay si Rabbiga sidii taliyihii, oo Saadooq sida wadaadka sare.
29:23 Markaasaa Sulaymaan carshigii Rabbiga ku fadhiistay sidii uu Boqor, in meeshii aabbihiis Daa'uud, iyo waxa qof walba ka farxisay. Nin kasta oo isaga reer binu Israa'iil ay addeecin.
29:24 Waxaa intaa dheer, Madaxda oo dhan, iyo awood u, iyo kulli Boqor Daa'uud wiilashiisii ​​ballan-qaaday in ay gacanta ku, oo waxay noqdeen maado Boqor Sulaymaan.
29:25 Markaasaa Rabbigu wuxuu Sulaymaan oo dhan reer binu Israa'iil la weyneeyo. Oo wuxuu isaga siiyey boqortooyada ammaan badan, nooc ah sida mid ka mid ma uu isaga ka hor, sida oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil.
29:26 Haddaba Daa'uud, kan ahaa ina Yesay, boqor ka ahaa oo dhan reer binu Israa'iil.
29:27 maalmaha lagu jiro oo uu reer binu Israa'iil boqor u ahaa afartan sannadood. Toddoba sannadood ayuu Xebroon boqor ka ahaa, iyo saddex iyo soddon sannadoodna Yeruusaalem.
29:28 Oo wuxuu dhintay isagoo da 'weyn, ka dhergay cimri, iyo hodan, iyo ammaanta. Iyo wiilkiisii ​​Sulaymaan ahaa meeshiisii ​​boqor ka noqday.
29:29 Haddaba falimihiisii ​​kale Boqor Daa'uud, hore u dambeeyey, la qoray kitaabkii Samuu'eel oo ahaa waxarkihii, iyo kitaabkii Nebi Naataan, iyo taariikhdii Gaad oo ahaa waxarkihii ay,
29:30 ku saabsan boqornimadiisa oo dhan iyo xooggaaga, iyo wakhtiyadii ay isaga hoos maray, labadaba Israa'iil oo dhan iyo boqortooyooyinkii dalalkii ku.